Xalaal Safarka Sarajevo - Makhaayadaha - Masaajidyada - Hoteelada Saaxiibtinimada Muslimiinta
Sarajevo, waa caasimada Bosnia iyo Herzegovina, iyo magaaladeeda ugu weyn, waxaana ku nool 430,000 oo muwaadiniin ah. Magaalada inteeda badan waxay ku dhex taal Xiriirka Bosnia iyo Herzegovina, laakiin qaybo ka mid ah waxay ku yaalliin Republika Srpska. Sarajevo waa dalxiis aad u saaxiibtinimo badan, gaar ahaan Old Town oo ku taal bartamaha magaalada.
Sarajevo waa mid ka mid ah magaalooyinka ugu taariikhda iyo xiisaha badan magaalooyinka Yurub. Waa goob ay ku kala jabeen Boqortooyadii Roomaanka ee Galbeedka iyo Bariga; halkaas oo ay ku noolaayeen dadyowgii Roman Catholic Catholic galbeed, bariga Orthodox bariga iyo Ottoman south, oo ay ku wada noolaayeen kuna dagaallami jireen. Waxay labadaba tusaale u tahay qalalaase taariikhi ah iyo isku dhaca ilbaxnimada, iyo sidoo kale nalka rajada nabadda iyadoo loo marayo dulqaadka dhaqamada badan. Magaalada ayaa dhaqan ahaan caan ku ah kala duwanaanta diinta, iyada oo Muslimiin, Masiixiyiin Orthodox, Katoolik, iyo Yuhuud ay halkan ku wada noolaayeen qarniyo. Intaa waxaa sii dheer, kala duwanaanta taariikhiga ah ee magaalada ayaa si xoogan uga dhex muuqda qaab dhismeedkeeda. Qaybo ka mid ah magaalada waxay leeyihiin muuqaal reer galbeed-yurub aad uwanaagsan, halka qeybaha kale ee magaalada, oo inta badan ka durugsan, ay leeyihiin gabi ahaanba dareen Ottoman ah Runtii waa magaalada ay barigu kula kulanto galbeedka.
Dhacdooyinka muhiimka ah ee taariikhda Sarajevo waxaa ka mid ah dilkii 1914 ee Austrian Archduke Franz Ferdinand, oo horseeday Dagaalkii Koowaad ee Adduunka, iyo 1984 Ciyaaraha Olombikada.
Magaalada waxay si muuqata uga soo kabatay waxyeeladii ugu badneyd ee ay geysteen Dagaaladii Yugoslavia ee 1992-1995. Sarajevo waa caasimad caalami ah oo Yurub ah oo leh qallooc gaar ah oo Bariga ah oo ku faraxsan in la baaro. Dadku waa dad saaxiibtinimo badan, ha ahaadeen Bosniaks, Croats, Serb ama cid kale. Ma jiro wax dambi ah oo aad u yar, iyadoo darajaynta magaaladu tahay mid ka mid ah kuwa ugu ammaansan Koonfur-bari Yurub.
Magaalada Sarajevo waxay u fidsan tahay galbeedka-bari webiga Miljacka; Wadada halbowlaha iyo jidadka taraamka waxay u muuqdaan inay raacaan jihada galbeed-bari. Waxaa la dhigay dooxo cidhiidhi ah, oo ay ku wareegsan yihiin buuro saddex dhinac ah.
Dalxiisayaasha intooda badan waqti badan ayey ku qaataan Old Town (Stari Grad). Qeybta bari ee Old Town waxay ka kooban tahay Bascarsija oo ay saameyn ku yeelatay Cusmaaniyiinta (BAHS CHAR iyaa; sifo ahaan baš (madaxa, weyn), aršija (bazaar, aagga ganacsiga) oo af turki ah), halka qeybta galbeedna ay soo bandhigeyso qaab dhismeed iyo dhaqan la yimid Austria-Hungary, oo si maldahan u matalaysa magaalada inay tahay goob kulan oo u dhaxeysa Bariga iyo Galbeedka
Xarunta Macluumaadka Dalxiiska, Saaray 58. (la cusbooneysiiyay Agoosto 2020)
Sarajevo waxay leedahay jawi qaaradeed oo qoyan, maxaa yeelay buuraha ku hareeraysan magaalada waxay si weyn u yareeyaan saameynta badda ee Badda Adriatic. Jiilaalku caadi ahaan waa kuleyl (rikoodhka ugu sarreeya 41 ° C sanadkii 2008) celcelis ahaan 46 maalmood sanadkiiba ka sarreeya 32 ° C, halka jiilaalka ay yihiin baraf iyo qabow celcelis ahaan 4 maalmood sanadkiiba ka hooseeya -15 ° C. Roob ayaa la filan karaa xilli kasta, celcelis ahaan 75 maalmood oo roob ah sanadkiiba, oo xilliga jiilaalka inta badan u daata sida barafka.
Haddii aad degan tahay guri gaar loo leeyahay halkii aad ka dagi lahayd hoteel, waa inaad iska diiwaangelisaa booliska maxalliga ah 24 saac gudahood markaad timaaddo. Ku guuldareysiga isdiiwaangalinta waxay sababi kartaa ganaax ama suurtagal ah in laga saaro, laakiin waxay u badan tahay inaysan cidna dhib ku qabin.
Madaarka Sarajevo (Medjunarodni Aerodrom Sarajevo, Butmir Airport,), Kurta Schorka 36, ​​Sarajevo 71210 (6.1 km koonfur-galbeed saldhiga tareenka, xaafada Butmir). Duulimaadyada soo socda ayaa ka howlgala kana soo dega garoonka diyaaradaha ee Sarajevo: Adria Airways (Ljubljana), Air Serbia (Belgrade), Austrian Airlines (Vienna), Croatia Airlines (Zagreb), Eurowings (Cologne / Bonn, Stuttgart, Berlin), [Lufthansa] ( Madaarka Munich), Noorway, Stockholm Arlanda Airport xilliyeed), Pegasus (Istanbul-Sabiha Gocken, kaliya maalmo cayiman oo usbuuca ah), Qatar Airways (Doha) iyo Turkish Airlines (Istanbul-Atatürk). (cusbooneysiiyay Oktoobar 2015)
Hoolka weyn ee garoonka diyaaradaha (ka dib caadooyinka, Xarunta Dhexe) waxaa ku yaal tusaale ahaan sarrifka lacagaha (qolka dabaqa dhexe), lumay & la helay (ka dib caadooyinka midigta) iyo buugaag (ka dib caadooyinka bidix , marka loo eego NW dhamaadka hoolka dhexe, oo kuyaala agagaarka albaabada laga soo galo), halkaasoo sidoo kale kaararka SIM (BH Telecom) lagu iibiyo. Markaad dhoofayso, aagga cuntada degdegga ah ee jaranjarada waa la heli karaa xitaa ka hor inta aan la galin ama alaab la dhigin, iyo dukaanka bilaashka ah ee dabaqa ka dambeeya ka dib marka jeegga nabadgelyadu aqbalo euro sidoo kale
Wadayaasha tagaasida waxay leeyihiin qayb gacan-wadaag ah oo ay uga dhoofayaan garoonka diyaaradaha, maaddaama aysan basaska magaalada ka shaqeeya ee loo yaqaan (GRAS) u dhexeyn karin garoonka diyaaradaha iyo magaalada mar dambe. Centrotrans Eurolines, oo kaashanaysa Madaarka Caalamiga ah ee Sarajevo, waxay bixisaa adeeg bas ah Aerodrom (Airport) - Baščaršija (faras magaalaha), (tigidh hal dhinac ah 5 KM, tigidhka soo noqoshada 8 KM). Waxaa jira jadwallo kaladuwan xagaaga iyo jiilaalka, jadwalka baskuna wuxuu lamid yahay jadwalka duulimaadka. Jadwalka jiilaalka oo shaqeynaya illaa Maarso 24, 2018, fadlan halkan guji. Tagaasida tagaya / ka tagaya garoonka ayaa si layaableh qaali ugu ah masaafada gaaban. Wadayaasha tagaasida waxay u isticmaalaan liisaska qiimaha been abuurka ah ee dalxiisayaasha. Qiimaha tagaasida ee dhabta ah ee magaalada loo raaco waa 16 KM. Waxaad sidoo kale lugeyn kartaa 600 m ilaa Dobrinja oo aad tagsi taksi ah ka xigtaa halkaas (~ 13 KM). Qaar ka mid ah hudheelada Sarajevo waxay abaabulaan wareejinta garoonka diyaaradaha martida, sidoo kale, qiimayaashuna way ku kala duwanaan karaan qarash aad u yar ilaa ay ka sarreeyaan qiimaha tagaasida.
Gawaarida baska # 103 ee ka imanaya Madaarka illaa Xarunta Magaalada [cusbooneysiiyay 2017.11]
Helitaanka baskan ma aha mid adag laakiin sidoo kale ma cadda, waxayna u baahan tahay socod dhan 600 m ilaa Dobrinja, markaa hubi inaad daabacato khariidad kahor, Khariidadaha Google waa sax. Waa inaad ka baxdaa garoonka diyaaradaha ee iridda weyn, waa halka ay ku dhammaato laamiga, marka midig u leexo oo bilow jidka aad ku socoto. Dhinaca bidix waxaa ku yaal xaafad la degan yahay oo lagu magacaabo Dobrinja. Soco dhowr boqol oo mitir ka dibna jaray xaafada si aad u gaarto waddo kale oo weyn oo basaska lagu magacaabo Dobrinja škola B Khariidadaha Google horteeda Xarunta Mercator Dobrinja. Halkani waa halka tarooli 103 istaago 6 - 7 daqiiqo kasta inta lagu jiro maalinta. Tarooli waa mid aad u gaabis ah, sidaa darteed waxay qaadan doontaa ilaa 25 daqiiqo in la aado Plaza Austrija (Trg Austrijski), oo ah rugta ugu dambeysa iyo bartamaha magaalada hore, haddii aad ka gudubto Buundada Latinka.
Si la mid ah ayaad ku sameyn kartaa jidka dib ugu noqoshada garoonka diyaaradaha. Qiimaha gawaarida 1.80 KM ayaa la siiyay darawalka illaa Nofeembar 2017. Hubso inaad iibsato tigidh, maaddaama kormeerayaashu ay yihiin kuwo soo noqnoqda.
Haddii aad ku sugan tahay aagga garoonka diyaaradaha, tixgeli inaad hubiso Matxafka Tunnel (Tunel Spasa) dhinaca midig ee dhabaha diyaaraduhu ku ordaan oo keliya, waxay kaa badbaadin doontaa safarka aad ka tagayso bartamaha magaalada goor dambe.
The Saldhiga Tareenka ee Sarajevo (Nova željeznička stanica; cinwaanka: Put života 2) waa rugta ugu muhiimsan magaalada. Ku safridda tareenka waxay ahaan jirtay nooc gaadiid aad loo jecel yahay ka hor burburka Yugoslavia, laakiin kaabayaasha dhaqaale ayaa si aad ah u burburay dagaalladii, adeegii tareenkana si dhib leh ayuu ku dhacay. Saldhigga tareenka ayaa ku jira xaalad burbursan, waxaana keliya u adeegta dhowr tareenno maalintii. Ha ka fileynin tareennada xawaaraha sare halkan. Saldhiggu wuxuu ku ag yaal midig Avaz Twist Tower, taas oo sahlaysa in meelkasta oo magaalada ka mid ah laga helo. Gudaha dhismaha waxaa ku yaal miis macluumaad, xafiiska tikidhada, musqulaha, iyo baararka qaar.
The Calipašin Saldhigga Tareenka Badankiisa (Željeznička Stanica Alipašin Inta badan; cinwaanka: Safeta Zajke) waxay noqon kartaa xarun tareen oo kale (sare) oo ku taal Sarajevo.
Tareenka Zagreb-Bosnia ayaa umuuqda in la joojiyay tan iyo bishii Diseembar 2016.
Tareenka kaliya ee caalamiga ah ee taga Bosnia wuxuu ka shaqeeyaa Zagreb. Safarku waa mid qurux badan, waqtiga safarkana waa loo barbardhigi karaa baska. Waxaa jira hal tareen oo maalinle ah oo udhaxeeya Sarajevo iyo Zagreb jiho kasta. Tigidhada waxay ku baxayaan 59 KM hal wado, 95 KM soo celin. Tareenadu ma aha kuwa qaboojiyaha leh, musqulaha ma fiicna, laakiin haddii kale tareenku waa raaxo. Waqtiyada safarku waa qiyaastii 9 saacadood, laakiin waxay ku xiran tahay dib u dhacyo dheer oo ku yimaada kantaroolka baasaboorka labada dhinac ee soohdinta Croatia. Tareen ayaa ka taga magaalada Zagreb maalin walba saacada marka ay tahay 09:18 wuxuuna imaanayaa Sarajevo saacadu markay tahay 18:18. Tareenka ku noqoshada Zagreb ee loo maro Zenica, Doboj iyo Banja Luka wuxuu ka tagayaa Sarajevo 10:43 wuxuuna imaanayaa Zagreb 19:49. Jadwalka ayaa laga heli karaa halkan. Tareenku ma haysto baabuur cuntada lagu cuno oo saaran, ama cunto kale oo la bixiyo. Horay u soo qaado alaabada.
Ma jiro xiriir tareen oo hadda ka socda Ploče.
Laga soo bilaabo Mostar
Waxaa jira laba tareen oo ka baxa Čapljina ilaa Sarajevo oo sii mara magaalada Mostar (07:06 iyo 19:19). Waxa kale oo jira laba tareen maalin kasta laga bilaabo Sarajevo ilaa Čapljina iyada oo loo maro Mostar (07:15 iyo 18:57). Safarku wuxuu qaadanayaa 2½ saacadood wuxuuna ku kacayaa 11 KM (Oktoobar 2017).
Wadooyinka Bosnia badanaa waa hal haad oo loo maro dhinac kasta. Sababta oo ah buuraleyda dhulka dariiqyadu waxay u muuqdaan kuwo leexleexan oo fara badan, sidaa darteed xadka xawaaraha ayaa ka hooseeya (inta badan 80 km / saacaddii). Ka taxaddar gawaarida waaweyn iyo gawaarida kale ee sida halista ah u maraya waddo kasta. Boosniya waxay leedahay godad badan oo ay tahay inaad marwalba ku kaxaysatid nalalkaaga on (maalin ama habeen). Si kastaba ha noqotee, waxaa jiray casriyeyn weyn.
Baabuur gaar ah ama bas yar
Tours GEA, Kneza Milosa 65, Belgrade. Waxay bixisaa isku xirnaanta gawaarida yar yar ama gawaarida gaarka loo leeyahay inta u dhaxeysa Sarajevo iyo Belgrade. Waa inaad kula xiriirtaa taleefan ama emayl ka hor safarka. Safarku wuxuu qaadanayaa 5½-6 saacadood. € 20 (hal dhinac), € 35 (soo noqosho)
P-AIR Magyarország Kft., 1037 Budapest, Csillaghegyi út 19-21 .. Waxay bixisaa baska baska inta udhaxeysa Madaarka Tuzla (oo ah xarun Wizzair) iyo Sarajevo. Safarku wuxuu qaadanayaa 2 saacadood. Boos celis waa in la sameeyaa ka hor bixitaanka € 18 (hal dhinac), € 36 (soo celin), € 1 (khidmadda maamulka). (cusbooneysiiyay Oktoobar 2015)
Sarajevo waxa ku yaal laba saldhig oo basaska laga raaco, saldhiga weyn iyo saldhiga bari. Dhammaan basaska iskudhafan waxaad ka bixineysaa lacag shandada. Lacagtan oo ah 1 KM ama € 1 gabal kasta oo shandado ah ayaa darawalka la siiyaa markuu fuulo. Darawalada qaar ayaa doorbidaya in lagu bixiyo isbedelka saxda ah ee lacagta saxda ah (mararka qaar lacag maxali ah, mararka qaar oo codsanaya in lagu bixiyo euro) mararka qaarna sidoo kale waxay diidaan in lagu bixiyo qadaadiic aad u yar. Marka isbedelka qaar diyaar u ahaw. Ku Saldhigga weyn ee basaska (Autobuska stanica) wuxuu ku teedsan yahay xarunta tareenka, dhammaadka lambarka taraamka 1 tareenka oo kuu geynaya Old Town (1.60 KM). Istaanka baskaan wuxuu u adeegaa labadaba gudaha iyo dibada. Waxaa lagugula talinayaa inaad horay u iibsato tikidhada caalamiga ah maxaa yeelay jidadkan si dhakhso leh ayey u buuxsamaan Tigidhada caalamiga ah waxaa laga iibsan karaa khadka tooska ah, saldhigga, ama Xafiiska Eurolines agagaarka cathedral-ka inta udhaxeysa suuqii hore. Macluumaadka jidadka basaska sidoo kale waxaa laga heli karaa xafiisyada macluumaadka dalxiiska.
Waxaa jira basas dhowr ah maalintii u kaca / ka yimaada Mostar oo iyaguna istaaga Konjic iyo Jablanica inta ay socdaan. Kuwaani waxay baxaan 06:00, 07:00, 07:35, 08:00, 08:15, 09:00, 09:30, 10:30, 11:30, 12:30, 14:30, 15:30 iyo ilaa 18:00, waqtiga safarkuna waa ~ 2½ saacadood. Tikidhada keli ah waxay ku kacayaan 13.50 KM, tigidhada celinta waa 19 KM. Waxa kale oo jira basas u kala baxa (7-8 saacadood) iyo bas maalinle ah oo u socda Dubrovnik oo baxa 07: 00 waxayna ku kacaysaa 40-160 KM.
Waxaa jira basas dhowr ah maalintii laga bilaabo saldhigga weyn ee basaska illaa Banja Luka. Kuwaani waxay baxaan 05:00, 07:55, 09:15, 14:30, 15:30 iyo 16:30. Waqtiga safarku waa ugu yaraan 5 saacadood.
Waxaa jira bas maalinle ah oo taga Graz iyo Vienna, oo ka taga saldhigga basaska weyn 08:00, una gaara Graz 19:45 iyo Vienna ilaa 2 saacadood kadib. Tigidhka hal dhinac ah ayaa ku kacaya € 44. Waa inaad lacag siisaa wadaha gaariga 2 KM si uu u qaado boorsooyinka. Jidka waxaa joogsada joogsiyo badan, oo ay ku jiraan cuntada iyo musqulaha. Ha isku halleynin “joogsiga cuntada” maadaama ay asal ahaan yihiin dukaamo laga iibsado qaxwada waxaadna u baahan doontaa lacag maxalli ah oo aad wax ku iibsato.
Eurobusways waxay si toos ah ugu shaqeysaa inta udhaxeysa Sarajevo iyo Budapest.
Basaska taga Tuzla waxay ka baxaan saldhiga weyn ee basaska qiyaastii saacad kasta maalin kasta. Safarku wuxuu qaadanayaa ugu yaraan 3 saacadood, wuxuuna ku kacayaa qiyaastii 11 KM.
Waxaa jira bas maalin kasta ka yimaada Pristina oo ku taal Kosovo markay tahay 18:30 goobta basaska laga raaco. Basku wuxuu ku qoran yahay jadwalka istaanka isagoo u safraya Novi Pazar, Serbia. Halkaas ayuu uga sii gudbayaa ilaa Sarajevo. Waxaad ka iibsan kartaa tigidhka Novi Pazar ee xarunta basaska, ama kantaroolaha saaran baska safarka oo dhan. Waxaa laga yaabaa inaad basaska u beddelatid Novi Pazar (taas oo ah wax la yaab leh oo aan dhib lahayn). Qiimaha laga soo bilaabo Pristina ilaa Novi Pazar waa € 7, laga bilaabo Novi Pazar ilaa Sarajevo waa and 15, oo bixinta ayaa suuragal ah euro ama diinaar Serbian ah. Basku wuxuu yimid Novi Pazar saqdii dhexe, iyo Sarajevo abbaare 06:00. Hubso inaad haysato dukumintiga safarka ee saxda ah si aad u soo gasho Serbia (eeg Kosovo Get qaybta) maaddaama kantaroolaha uusan ku siin doonin tikidhada adiga oo aan marka hore arkin! Suurtagalnimada kale ayaa ah in bas laga raadsado Podgorica oo ku taal Montenegro, ka dibna laga sii safro halkaas oo loo tago Pristina.
Waxaa jira hal bas maalin kasta laga bilaabo saldhiga weyn ilaa Belgrade, saacadu markay tahay 06:00, qiimahiisu waa 40 KM.
The Saldhigga basaska ee Bariga (Autobuska stanica Istočno Sarajevo 'Lukavica' ) waa boosteejo bas oo kale oo ku taal Bariga (Serbigu ku badan yahay) Sarajevo oo ku taal bannaanka magaalada oo u adeegta Republika Srpska iyo meelaha loo aado Serbia iyo Montenegro. Si aad halkan u timaaddo, waxay u badan tahay inay ugu sahlan tahay inaad ballansato/dalbato taksi (qiyaastii 15 KM). Haddii aad isticmaaleyso gaadiidka dadweynaha, qaado 103 ama 107 bas/trolleybus, ama 31E, dhammaantoodna ka socda Trg Austria oo ka bax saldhigga ugu dambeeya, oo dadka weydii sida loo tago saldhigga basaska Lukavica (basaska iyo baabuurta yar -yar ee taga bartamaha magaalada waxay ka baxaan terminal agagaarka 200 m oo ah meesha basaska caalamiga ahi yimaadaan). Imaanshaha Istočno Sarajevo Bus Station, ku sii wad waddada weyn, adigoo ku leh boosteejada baska midigtaada - waxaad arki doontaa Dobrinja trolleybus oo istaagaysa dhinacaaga midig. Ka iibso tikidhada waabka. Haddii aad u baahan tahay lacagta Boosniyaanka waxaa ku yaal mashiinka kaashka Visa/Mastercard (bankomat) oo ku yaal Xarunta wax iibsiga ee Tom ee u dhow. Si aad halkaas u tagto u soco dhinaca ka soo horjeeda joogsiga trolleybus -ka, adiga oo leh boosteejada baska ee bidixdaada. Xarunta dukaamaysigu waxay ku taal nalka weyn ee taraafikada ee xiga. Waxaa jira 2 mishiin oo lacag caddaan ah (Unicredit iyo NLB) oo waxaad ka heli doontaa dukaan weyn.
Saldhigga loo yaqaan 'Lukavica' Eastern 'wuxuu runti galbeed uga jiraa saldhigga basaska ee' weyn ', asal ahaanna wuxuu galbeedka uga yaal inta badan xaafadaha Sarajevo.
Baska ka raaca istaanka baska ee Lukavica ilaa Podgorica (35 KM) iyo Budva (40 KM) Montenegro waxay qaadataa 7 saacadood (35 KM) laakiin waa safar aad u layaableh oo maraya baadiyaha cajiibka ah wadada Lukavica-Trnovo-Rataj-Foca-Brod -Hum-Goransko-Niksic-Danilovgrad-Podgorica (fadhiiso dhinaca midig ee baska aragtiyada ugu fiican). Basasku waxay baxaan 08:15, 09:00, 14:00 iyo 22:30. Bixinta lacagta yuurooyinka waa la aqbalay.
Waqtiyada baska laga baxo ee Lukavica - Belgrade waa: 08:00, 09:45, 12:30, 15:00 iyo 22:00 maalin kasta. Hal tikid tikid ah wuxuu ku kacayaa 40 KM.
Sarajevo waa magaalo yar, qurux badan oo leh astaamo badan. Lumiddu waa wax aan macquul aheyn haddii aad leedahay khariidad (in kasta oo luminta waddooyinka Bascarsija ee wareegaya ay sidoo kale qayb ka noqon karto baashaalka!) Khariidado aad u wanaagsan oo bilaash ah ayaa laga heli karaa xafiiska macluumaadka dalxiiska, xarumaha dukaamaysiga, iyo hudheelada. Barnaamij khariidad ku saabsan taleefankaaga casriga ah ayaa sidoo kale fiican, sidoo kale dukaamada buugaagta qaarkood ayaa sidoo kale laga yaabaa inay iibiyaan khariidadaha dhaqameed ee daabacan ee magaalada.
Weydiinta Sarajevans tilmaamaha waa layli aan waxba tarayn. Dadku ma yaqaanaan magacyada jidadka oo ka soo jeeda dhismihii ay ku soo wada noolaayeen intii ay noolaayeen. Si kastaba ha noqotee, kuuma sheegi doonaan tan, oo sida caadiga ah waxay kuu tilmaami doonaan jihada qaarkood, badanaa maahan jihada saxda ah. Darawallada tagaasida lagama filan karo inay wax helaan laakiin cinwaannada ugu cad cad mooyee inaad u sheegtid meesha ay aadayaan, afka Boosniya — tusitaanka darawalka khariidadaada ayaa ku soo hagaagi doona.
Magaalada Sarajevo, astaamaha jidadka way yaryihiin waana kala fog yihiin, waana yar yihiin iyo dhinacyada dhismayaasha oo aad uga fog si loo arko marka aad taagan tahay koonaha wadada. Nambarada dhismuhu way ka badan yihiin ama ka hooseeyaan laakiin ha raacin qaababka "boqolaal" ee Mareykanka, tusaale ahaan, 23 waddada Bjestiva ayaa laga yaabaa inay ka xirnaato waddada 27 Bjestiva.
GRAS waxay ka shaqeysaa gaadiidka dadweynaha magaalada Sarajevo.
Bartamaha Sarajevo waxaa u adeegta shabakad taraamyada laf-dhabarka ah taasoo ka dhigeysa wareeg saacad u wareegsan degmada bartamaha. Shabakadan taraamka ah ayaa la furay bartamihii-1870-yadii waxayna ahayd tii ugu horreysay ee Boqortooyada Austro-Hungaria, shabakadda taraamka Sarajevo ayaa markaa ka mid ah kuwa ugu da'da weyn Yurub. Tigidhada waa in horay looga sii iibsadaa kiishyada lagu calaamadeeyay tisak waddada ama darawalka, halkaasoo ay waxoogaa ka yar ku fadhiyaan (1.80 KM, oo lagu bixiyay lacag caddaan ah). Tigidhada waa in lagu ansaxiyaa marka gaariga la raacayo waxayna ku ansaxayaan hal safar kaliya. Beddelka taraamka ama baska macnaheedu waa ansaxinta tigidh cusub. Kaar maalin ah oo ansax ku ah socdaalka aan xadidnayn ee dhammaan gaadiidka dadweynaha ee aagga A ayaa loo heli karaa qiyaastii 5 KM. Kormeerayaashu waxay si joogto ah u raacaan gaadiidka dadweynaha: haddii aadan la xiriiri karin mashiinka wax ansaxiya maxaa yeelay taraamka aad ayuu u badan yahay, markaa ha fuulin taraamka. Haddii lagugu qabto adiga oo aan haysan tigidh ansax ah, taraamka ayaa lagaa kaxayn doonaa waana lagu ganaaxi doonaa 26.50 KM.
Shabakadda taraamka waxay ka kooban tahay ugu horreyn xariiq weyn ka dib socodka magaalada u dhexeysa Ilidza iyo Baščaršija (xariiq), oo leh dhowr laamood oo yaryar.
Nidaamka kireynta baaskiillada dadweynaha Nextbik in waxay leedahay 8 xarumood oo magaalada oo dhan ah oo baaskiillada la kireysan karo ama lagu celin karo. Si kastaba ha noqotee la soco in taraafikada Sarajevo ay dhimasho badan tahay (eeg Badbaadi), iyo kaabayaasha baaskiilka ee magaalada wali waa bilow. Kaliya waxaa lagula talinayaa baaskiillayda magaalooyinka ee xilliyada leh.
Ka taxaddar inaad taksi ka qaadatid tareenka weyn ama boosteejada basaska iyo garoonka diyaaradaha. Marka hore, darawallada waxaa lagu yaqaan inay lacag badan ka qaadaan dalxiisayaasha hadda yimid ee aan aagga garanayn, sidaa darteed waxaad si fudud ugu dambayn kartaa inaad bixiso ugu yaraan laba jibbaar (inta badan aad u awoodi karo) qiimaha caadiga ah. Waxaa lagugula talinayaa inaad fikrad kahesho qiimaha ugu badan ee taksi intaadan imaan kahor (weydii hoygaaga / hudheelkaaga) iyo inaad wadahalada qiimaha kala xaajooto darawalka kahor. Haddii dhibaato dhacdo markii aad timaado meeshaad u socoto oo darawalku si lama filaan ah ugu hadlo Ingiriisiga yar, weydiiso hoygaaga caawimaad - waxay u baran doonaan inay la macaamilaan khiyaanadan. Ta labaad, “khayaanada taksi” ee kale ee caanka ah waxay ka hawl gashaa Sarajevo, halkaas oo dalxiiska aan laga filaynin la geyn doono hudheel ka qaalisan kan uu isagu ama iyadu codsadeen in la geeyo, darawalka iyo soo dhawaynta ayaa ku dhaaranaya in cusub imaanshuhu waa xaqiiqda meesha saxda ah. Yeelo sawir meesha aad ku diyaar garoobeyso, ama ugu yaraan aqoon u yeelo muuqaalkiisa. Fursado badan oo hoyga ayaa ka bixin doona meel kasta oo aad timaado, tanina badanaa waa bilaash ama qiimo aad u yar.
Dhamaan tagaasida sharciga ah waxaa looga baahan yahay inay ku suntan yihiin calaamadda “TAXI” dusha sare iyo taargooyinka ay ku qoran yihiin “TA” iyo inay isticmaalaan mitirka taksiga, laakiin ugu yaraan masaafo ka badan 25 km ayaa sidoo kale suuragal ah in darawalka lagala xaajoodo heerka. hore (qiimaha waa lagu heshiin karaa laakiin waa inuusan ka badnaan qadarka mitirka taksiga). Qiimaha tagaasida waxaa loo badan karaa oo kaliya in lagu bixiyo lacag kaash ah darawalkuna wuxuu bixin doonaa rasiid marka la codsado. Qiimaha tagaasida wuu kala duwanaan karaa, waxayna kuxirantahay taraafikada, laakiin laga bilaabo Madaarka illaa Baščaršija caadi ahaan waxay ku kacaysaa qiyaastii 17 - 20 KM. Marka loo barbardhigo magaalooyinka kale ee caasimadaha yurub, khidmadaha tagaasidu aad ayey u hooseeyaan: qiimaha safarku waa 1.50 KM, qiimaha caadiga ah kiiloomitirkiiba waa 1 KM iyo 1 KM ayaa laga qaadayaa qayb kasta oo shandado ah (laga bilaabo Nofeembar 2017).
Haddii aad weli jeceshahay inaad dalbato taksi, fadlan isku day…
Tagaarka Holand, lacag-la'aan: 0800 20234.
Taksi Cas (Crveni Taksi).
Samiir & Amiir Taksi.
Taksi Jaale ah (Žuti Taksi)
Marka laga reebo Matxafka Tunnelka iyo guga Bosna, dhammaan astaamaha waxay ku yaalliin gudaha ama hareeraha magaalada hore, ama lagu gaari karo masaafad socod. Dhowr safar oo lug ah ayaa la heli karaa, socdaal hagitaan oo bilaash ah wuxuu bilaabmaa maalin kasta 10:30 isgoyska Gazi Husrev begova iyo Mula Mustafa Baseskija street (cinwaanka: Velika Avlija 14) wuxuuna daboolaa inta badan Baščaršija.
Baščaršija waa degmada taariikhiga ah ee Sarajevo. Wadooyinka isku xira, masaajida iyo dukaamada u eg qaabka wadnaha ayaa magaalada laga dareemayaa inay tahay aduun ka fog Yurub marka wicitaanka salaada la bilaabo. Waxaad ku socon kartaa kaniisada Katooliga, kaniisada Orthodox ama sunagog isla markaana aad maqli kartaa wicitaanka islaamka ee salaada isla waqtigaas. Suuqaan duugga ah waxaad ka heli kartaa daraasiin dukaanno lagu iibiyo alaabada gacmaha lagu sameeyo, alwaax, iyo macmacaan. Dhismayaal taariikhi ah oo fara badan ayaa ku hareeraysan waddada Gazi Husrev-begova.
Sebilj, waa isha ugu caansan ee Sarajevo ee Baščaršija degmo.
Sebilj (Baščaršija, Qoolley Square). 24/7. Isha alwaax-Cusmaaniyiinta been-abuurka ah ee ku taal bartamaha fagaaraha magaalada hore ee Sarajevo. Waxaa dhistay Mehmed Pasha Kukavica sanadkii 1753, wuxuuna hoosta ka xariiqay xukunkii Austro-Hungaria inuu u wareego meesha uu hada ku sugan yahay 1891 oo uu dhisay naqshadeeyaha reer Austria Alexander Wittek. Saddex nuqul oo ka mid ah isha ayaa jira, siday u kala horreeyaan Belgrade iyo Novi Pazar oo ka tirsan Serbia, iyo St. Louis. Isha waxay bixisaa hooska iyo biyo la cabbo socdaalayaasha. Fagaaraha Qoolleyda ku wareegsan ayaa magaceeda ka helay xamaamyo aan tiro lahayn oo hareeraha ka qulqulaya. Qoolleyda quudinta waa la oggol yahay, iibiyaha wata mootada gacanta ayaa hadhuudh ka iibiya dalxiisayaasha si ay shimbiraha u quudiyaan. Bilaash (la cusbooneysiiyay Agoosto 2020)
Morića Inn (Morića Han), Sarači 77 (Baščaršija, irridu waxay ku taal dhinaca koonfureed ee dhismaha, laga bilaabo wadada Sarai). 08: 00-22: 15. Goobta kaliya ee Ottoman Inn (han macno ahaan waxaa loola jeedaa wadada dhinaceeda) oo ku taal Sarajevo, oo la dhisay 1551, iyadoo hoos timaadda deeqda Gazi Husrev-Beg (vakuf). Waxay u adeegtay sidii caravanserai, awood u leh inay dejiso ilaa 300 oo marti ah, 70 fardo, waxayna bixisay 43 qol oo ay socotadu ku hoyan karaan. On 29 July 1878, hudheelka ayaa noqday goobta dhaqdhaqaaqa dibad-baxa ee looga soo horjeedo qabsashadii Austro-Hungaria ee Bosnia, iyo Golaha Dadka (Narodni Odbor) ayaa lagu aasaasay halkan. Dhismuhu waxyeello ayaa soo gaadhay ama burburiyey dababka marar badan oo dib ayaa loo dhisay mar kasta, gaar ahaan 1697 iyo ugu dambayntii bishii Diseembar 1957 markii dhismaha oo dhami gubtay. Dib-u-dhiska wuxuu dhacay 1971 ilaa 1974, waxaana lagu daray qurxinta qoraalladii wacdi-garaafkii reer Faaris ee ka yimid gabayadii uu qoray Cumar Khayyám, oo ahaa abwaan reer Faaris ahaa qarnigii 12-aad. Lahaanshaha hantida hudheelka ayaa lagu soo celiyey Gazi Husrev-Beg hibeynta 1998, oo wuxuu ku yaal dukaan rooga iyo makhaayad dhaqameed, mararka qaarkood wuxuu martigeliyaa bandhigyo, wuxuuna siiyaa goob ganacsi ujeeddooyin u dhigma macnaha taariikhiga ah iyo ujeeddada dhismaha. Jaranjarooyinka labada dhinac ee barxadda gudaha waxay u oggolaaneysaa dadka soo booqda inay gaaraan dabaqa koowaad qolalka. Bilaash (la cusbooneysiiyay Agoosto 2020)
Kulanka Dhegeysiga (Sahat-kula), Mudželeti veliki (oo ku xigta Masjidka Gazi Husrev-bey). Taawarka saacadda, oo ah 30 mitir, ayaa ah kan ugu dheer Bosnia oo dhan, wuxuuna soo bilaabmay qarnigii 17-aad markii uu dhisay Gazi Husrev-beg oo ku xigay masaajidka oo isagana magaciisa ku xardhan. Munaaraddu waxay leedahay jaranjaro leh 76 tallaabo oo alwaax ah oo lagu qaabeeyey laba jibbaaran, waxayna soo bandhigaysaa waqtiga dhammaan 4-ta dhinac. Markii Eugene Savoy oo ka tirsan ciidanka Austaralia ay go’doomiyeen magaalada 1697 oo ay bililiqeysteen, munaaraddii ayaa dab la qabadsiiyay, laakiin dib ayaa loo soo celiyay 1762. Ka dib qabsashadii Austro-Hungaria ka dib, qaybta sare ee munaaradda waa la casriyeeyay, waxaana burburay Turkiga farsamada saacada waxaa lagu badalay mid cusub oo ka timid Gillet & Johnston, oo lagu sameeyay magaalada London sanadkii 1873. Farsamadii saacadda ee asalka ahayd ayaa loo wareejiyay masjidka Vratnik halkaas oo ay ku taal ilaa maanta. Cusboonaysiinta ugu dambaysay waxay ka bilaabmaysaa 1967, markii dilalku ahaayeen kuwo dahab lagu dahaadhay Waxyaabaha gaarka u ah munaaradda saacaddu waa inay umuuqato inay tahay munaaradda kaliya ee saacadda harsan ee adduunka soo bandhigaysa saacadda dayaxa (la turca, xisaabinta dayaxa). Qaabkan lagu cabiro waqtiga wuxuu tiriyaa saacado ilaa daqiiqada (cirbixiyeenada) qorrax dhaca halkii saqda dhexe, sida xisaabinta waqtiga casriga ah, sidaa darteed gacmuhu waxay kujiraan booska 12 saac ee qorrax dhac kasta, marka maalin cusub iyana bilaabato. Maaddaama qorraxdu u dhacdo aan sinnayn sannadka oo dhan, waqtiga wuxuu u baahan yahay in gacanta lagu xakameeyo oo dib loo cusbooneysiiyo 2 illaa 3 maalmood kasta. Hawsha dib u habaynta saacadda ayaa loo xilsaaray muvekit (saacad ilaaliye), oo qalab astronomical ah ku isticmaalay qol gaar ah oo la yiraahdo muvekithana si loo xisaabiyo booska qorraxda. Xilligan muvekit, Mensur Zlatar, oo ka shaqeeya dukaan dahabka lagu iibiyo oo ku dhow, ayaa loo xilsaaray mas'uuliyadda ilaa 1960s. Waqtiga saxda ah ee qorrax dhaca wuxuu ahaan jiray daqiiqad muhiim u ah dadka deegaanka inay jadwalaan waqtigooda salaada, laakiin ujeedada asalka ah ee diiniga ah ee kadambeysa waqtiga dayaxa ayaa mudo dheer kadib macnaheeda la ilaaway, taasoo dad badan u maleyneysa inay saacadu si fudud ugu xun tahay waqtiga haynta Sannadkii 2006, Komishanka Badbaadinta Taallooyinka Qaranka ayaa ku dhawaaqay munaaraddii saacadda inay tahay taallo qaran oo ay yeelato Bosnia iyo Herzegovina. Taawarka lama booqan karo, laakiin waxaa suurtagal ah in lagu istaago saldhigeeda iyadoo la raacayo tunnelka tagaya Pekara Imaret midigta xigta munaaradda (la cusbooneysiiyay Agoosto 2020)
Burburka Tašlihan inta udhaxeysa Hotel Europe iyo bezestan.
Tašlihan, Zelenih beretki (Latinska ćuprija). 24/7. Tašlihan wuxuu u adeegay mid ka mid ah saddexda caravanserais ee Sarajevo (kuwa kale waa Morića Han iyo Kolobara Han), magaca macno ahaan waxaa loo tarjumay 'dhagax han'. Waxaa la rumeysan yahay in Tašlihan uu ahaa hudheelkii ugu weynaa uguna wakiilka badnaa ee noociisa ah ee gobolka, waxaana la dhisay intii u dhaxeysay 1540-1543 farsamoyaqaanno reer Dubrovnik ah, oo dhismaha ku qalabeeyay cupolas Lead ka duwan labada kale ee hoyga. Waxay lahayd aasaas laba jibbaaran oo leh dhinacyada 47m, qolalka martida ee laba heer ah, iyo il barxadda ku taal. Dhowr dab ayaa waxyeeleeyay dhismaha, kii ugu dambeeyayna sanadkii 1879 gabi ahaanba waa uu dumiyey. Burburkii ugu dambeeyay ee haray ayaa laga saaray 1912, marka laga reebo darbiga la wadaago bezestan. Markii cilmi-baarista qadiimiga ah lagu sameeyay qayb ka mid ah dib-u-hagaajinta 1998 ee ku dhow Hotel Europe, haraadiga Tašlihan ayaa laga soo saaray beerta hoteelka. Goobta waxaa ku dhawaaqay Taallo Qaran oo ay leeyihiin Bosnia iyo Herzegovina oo ay ku dhawaaqeen Guddiga Ilaalinta Taaladaha Qaranka sanadkii 2004. Waa bilaash. (la cusbooneysiiyay Agoosto 2020)
Gudaha Aqalka Dawladda Hoose.
City Hall (Vijećnica), Obala Kulina Bana (Vijećnica). 10: 00-20: 00. Dhismaha qaabka soo nooleynta ee loo yaqaan 'Picudo-Moorish' ee loo yaqaan 'Iconic pseudo-Moorish style in Sarajevo', oo la dhisay intii u dhaxeysay 1892 iyo 1894 iyadoo la hoos keenay qabsashada Austro-Hungaria ee magaalada. Waxaa naqshadeeyay 1891 oo ahaa naqshadeeyaha reer Czech Karel Pařík, laakiin markii ay is khilaafeen wasaaradda, wuxuu ahaa Alexander Wittek oo sii waday howsha mashruuca laga bilaabo 1892 ilaa 1893 ilaa uu ka xanuunsaday oo uu ku dhintay Graz 1894. Shaqada waxaa lagu dhammeeyay 1894 by Ćiril Iveković, oo ku kacaya qiime dhan 984,000 oo taaj. Xarunta dawladda hoose waxaa si rasmi ah u hawlgaliyay 1896 Maamulka Magaalada oo hayey dhismaha illaa 1949, ka dib markii uu noqday Maktabadda Qaranka iyo Jaamacadda ee Bosnia iyo Herzegovina. 25 Ogosto 1992, dhismaha waxaa gubay madaafiicdii Serbian ee bilowgii go'doominta Sarajevo, taasoo sababtay burburin buuxda. Inta badan 1.5 milyan oo mug ah oo ku jira aruurinta maktabadda, oo 155,000 buugaag ah iyo qoraal gacmeedyo dhif ah ay ku bas beeleen dabka, inkasta oo ay jiraan dadaallo rayid ah oo lagu badbaadinayo. Vijećnica waxaa dib loogu soo celiyey intii u dhaxeysay 1996 iyo 2013 iyada oo kaalmo dhaqaale laga helay Austria, Komishanka Yurub iyo magaalada Barcelona, ​​iyadoo wadarta guud ay ku baxday 25 milyan oo KM. Hadda waa taallo qaran, dib loo furay illaa 2014, loona qoondeeyay inay tahay dhisme dhaqan oo loogu talagalay dhacdooyinka borotokoolka, riwaayadaha iyo bandhigyada. 5 KM. (la cusbooneysiiyay Agoosto 2020)
Tiyaatarka Qaranka (Narodno pozorište), Obala Kulina bana 9 (Posta). Tiyaatarka Qaranka waxaa la aasaasay 1921, iyadoo xaflad furitaan ay hogaamineysay Branislav Nušić, oo markaa ahaa Madaxa Waaxda Farshaxanka ee Wasaaradda Waxbarashada. Bishii Nofeembar 9, 1946, Sarajevo Opera House waxay ku bilaabatay waxqabadkeeda farshaxanka leh filimka 'B. Smetana's' Aroosadda Bartered. Qeybta baleedka ayaa sidoo kale la aasaasay 1946, laakiin waxqabadkii ugu horreeyay ee madax-bannaan, Goynta by Papandopulo, dib ayaa loo dhigay illaa 25-ka May, 1950. Dhismaha hadda socda, oo la dhisay 1899 oo loo yaqaan 'House House' (kaas oo sidoo kale loo yaqaanay "Naadiga Gentlemen" ama "Clubhouse"), waxaa naqshadeeyay naqshadaha buugga weedhaha Czech Karel Pařík, oo gacan ka geystay in ka badan 160 dhisme oo ku yaal gudaha iyo hareeraha Sarajevo. Qaab-dhismeedkeeda iyo qaab-dhismeedkeeda awgeed, mid ka mid ah fagaarayaasha magaalada ee ugu horreeya Sarajevo ayaa laga sameeyay Tiyaatarka Qaranka hortiisa. (la cusbooneysiiyay Agoosto 2020)
Saraakiisha Casino (Dom Oružanih snaga Bosne i Hercegovine), Zelenih Beretki 2 (Drvenija). Khadka Saraakiisha 'waxaa la dhisay 1881 sida ku xusan naqshadeynta Karl Pařík. Waxay ahayd udub dhexaadka nolosha bulshada ee Sarajevo dabayaaqadii 19aad iyo horaantii qarnigii 20aad. Hoolka Ciidanka ee Bosnia iyo Herzegovina ayay milatarigu u isticmaali jireen tan iyo markii la aasaasay ujeedooyin kala duwan, sida bandhigyo farshaxan iyo muxaadarooyin dadweyne. Waxay qabataa laba hoolal oo waaweyn oo loogu talagalay soo dhaweynta iyo dhacdooyinka dhaqanka, waxayna ahayd goobta lagu qabtay xafladdii ugu horreysay ee miyuusig milatari ee magaalada, oo lagu qabtay 1881. (la cusbooneysiiyay Agoosto 2020)
Sarajevo waxay martigalisaa madxafyo badan oo mowduucyo kala duwan leh. Matxafyadu waxay ku deeqi karaan magan-qaboojiye qaboojiye ah inta lagu jiro xagaaga kulul ee Sarajevo, ama meel lagu kululeeyo xilliga qaboobaha.
Taariikh iyo taariikh-nololeed
Matxafka Magaalada Sarajevo (Brusa Bezistan), Abadžiluk 10 (Vijećnica, albaabku wuxuu ku yaal dhinaca bari ee dhismaha). M –Sa 10: 00–16: 00. Matxafku wuxuu raadraacaa horumarka Sarajevo laga soo bilaabo waqtiyadii hore iyada oo loo marayo Roman, Ottoman, Austro-Hungarian iyo waqtiyada casriga ah. Tani waa matxaf yar laakiin qiimaha 3 KM waa u qalantaa. Waqtiga oo dhan ee halkan lagu qaatay waxay u badan tahay in ka yar nus saac. Xarunta dhexe ee matxafku waa tusaale ka mid ah Old Town oo ku taal dabaqa hoose, oo uu sameeyay Husein Karišik sannadihii 1950-meeyadii, oo muujinaya xilligii Tašlihan ahaa dhawrsan Dabaqa labaad waxaa ku yaal dhar buluug caan ah (oo leh dun dahab ah) oo xoogaa fiican yataghan (seefta gaaban ee Turkiga) oo lagu soo bandhigay waxyaabo kale. 3 KM.
Matxafka Qaranka (midig) iyo dhismaha baarlamaanka (bidix).
Matxafka Qaranka (Zemaljski muzej), Zmaja od Bosne 3 (Muzeji, oo ku taal dhisme weyn oo heer sare ah oo ka soo horjeedda jidka Holiday Inn). Tu-Su. Bandhigyada joogtada ah ee taariikhda dabiiciga ah iyo aadanaha ee Bosnia iyo Herzegovina - oo ay ku jiraan bandhigga guryaha dhaqanka ee Turkiga ee Sarajevo oo ku baahsan qarnigii sagaal iyo tobnaad, ururinta ballaaran ee cayayaanka iyo naasleyda cufan iyo qayb weyn oo cilmiga geology ah oo laga soo qaaday adduunka oo dhan iyo tiro ka mid ah meteorites. Matxafka cusub ee dib loo furay wuxuu kaloo bixiyaa marin u helka beerta dhirta ee bartamaha afarta dhisme ee waaweyn: (1) qadiimiga ah laga soo bilaabo xilligii Roomaanka illaa qarnigii sagaalaad, (2) Maktabadda, (3) Ethnology iyo (4) sayniska dabiiciga ah. 6 KM. (la cusbooneysiiyay Agoosto 2020)
Matxafka Sarajevo 1878-1918, halkaas oo dilkii Archduke Franz Ferdinand ka dhacay.
Matxafka Sarajevo 1878-1918 (Muzej Sarajevo 1878-1918), Zelenih beretki 1 (Muzeji). M-Sa 10: 00-16: 00. Matxafku wuxuu u heellan yahay qabsashadii Austro-Hungaria ee Sarajevo, oo ka bilaabantay shirkii Baarliin ee 1878 kuna dhammaaday Dagaalkii Koowaad ee Adduunka ee 1918. Bandhiggu wuxuu ku muujinayaa nolosha xilligii Austro-Hungaria aragtiyo iyo mawduucyo kala duwan, oo ay ku jiraan iska caabbinta shaqada, qaab nololeedka, dhaqanka, diinta, warshadaha iyo dhismaha. Waqtigu wuxuu ku egyahay dilkii Archduke Franz Ferdinand iyo xaaskiisa Sophie dhismaha hortiisa. Madxafyada waxaa ku jira waxyaabo badan oo farshaxan ah iyo sawirro, oo ay weheliyaan taallo wax u eg oo Franz Ferdinand iyo Sophie ah. (la cusbooneysiiyay Agoosto 2020)
Guriga Svrzo (Svrzina kuća), Glođina ulica 8 (200 m waqooyiga magaalada jir). Isniinta ilaa Jimcaha 10: 00-16: 00, Sa 10: 00-15: 00. Qeyb ka mid ah Matxafka Magaalada Sarajevo, Guriga Svrzo wuxuu muujinayaa xaaladaha nololeed ee qoys muslim ah dhamaadka qarnigii 17aad. Guriga waxaa dhistay qoys caan ah oo reer Sarajevo ah oo la yiraahdo Glođo intii uu socday qabsashadii Cusmaaniyiintu ee magaalada, laakiin milkiilaha waxaa lagu wareejiyay qoyska Svrzo maadaama qoyska Glođo aysan lahayn rag ka dambeeya. Gudaha waxaa loo qaybiyaa laba qaybood: qaybta dadweynaha (selamuk) iyo qaybta qoyska (haremluk), taas oo iyaduna u kala qaybsan guri dhaqan ahaan dhaqan ahaan u kala duwan ragga, haweenka iyo shaqaalaha. In kasta oo gebi ahaanba alwaax laga dhisay, haddana dhismaha si la yaab leh ayaa loo ilaaliyay ilaa Go'doominta Sarajevo intii lagu guda jiray taas oo ay ku dhacday waxyeelo culus. Waxaa dib loo dhisay go'doominta ka dib waxaana dib loo furay 1997, waxaana dib loo cusboonaysiiyay 2005. 3 KM. (la cusbooneysiiyay Agoosto 2020)
Matxafka Maktabadda Gazi Husrev-Bey (Muzej Gazi Husrev-begove biblioteke), Gazi Husrev-begova br. 46 (oo ku xigta Gazi-Husrev wuxuu tuugaa Masaajidka), fax: + 387 33 205 525. Isniinta ilaa Jimcaha 09: 00-18: 00, Sa ayaa xiran, Su 09: 00-16: 00. Dhismaha maktabadda cusub ee Gazi Husrev-bey sidoo kale waxaa ku yaal matxaf ay ku urursan yihiin in ka badan 1200 oo shey. Bandhigan joogtada ah wuxuu soo bandhigayaa naqshadeynta islaamka, qalabka wax lagu cabiro waqtiga iyo walxaha nolol maalmeedka dadka muslimiinta ah. Qiimaha tigidhka matxafku waa 3 KM. Madxafka ka sakow Maktabadda Gazi Husrev-bey waxay haysaa ku dhowaad 100,000 oo cutub (qoraal gacmeedyo, buugaag daabacan, qoraalo, iyo dukumiintiyo kala duwan), laakiin marin u helka lacagaha maktabadda iyo qolalka akhriska ayaa ku kooban xubnaha kaliya. Diiwaangelinta isticmaale maktabad kasta oo macquul ah waxaa lagu sameeyaa kaarka xubinnimada ee shaqeynaya 12 bilood (30 KM, laakiin sidoo kale xubin maalinle ah (3 KM) ayaa ku qoran Liiska Qiimaha Adeegga). Gelitaanka maktabadda, bixitaanka, iyo aqoonsiga xubinnimada waxaa lagu sameeyaa Xarunta Soo Dhaweynta ee Maktabadda. Markii ay galayaan qolka akhriska, booqdayaashu waa inay keenaan kaarka xubinnimada iyo dukumenti aqoonsi ah oo lagu soo celiyo iyaga markii ay baxaan. 3 KM. (la cusbooneysiiyay Agoosto 2020)
Nabarradii ka soo gaadhay Dagaalkii Boosniya ayaa wali lagu arkaa qaybo badan oo magaalada ka mid ah, sida godadka rasaasta ee gidaarada ama dhismayaashii laga tegey. Khilaafka aan la xalin (eeg sanduuqa Dagaaladii Yugoslavia) Xusuus naxdin leh, iyo matxafyo iyo xusuusyo la xiriira Dagaalkii Boosniya ayaa ku kala firirsan magaalada.
The Tunnelka Rajada garoonka diyaaradaha hoostiisa.
Tunnelka Rajada (Tunel Spasa), Ulica Tuneli 1, 71210 Ilidža (Madxafka waxaa lagu tagi karaa lugta garoonka diyaaradaha, ama taraam laga raaco bartamaha magaalada Sarajevo, kadibna baska 32a (Ilidža - Butmir). Ka deg Donji Kotorac okretnica oo bidix u leexo Ulica Tuneli oo u dhaxaysa qabuuraha islaamka. Tunnelku wuxuu ku yaalaa beerta guri ee ha ka welwelin haddii aad u malaynayso inaad ku sii jeedo duleedka magaalada. xafiiska dalxiiska ee ku yaal Bartamaha Magaalada iyo Sarajevo Funky Tours ayaa bixisa safarro tunnel ah € 17, oo ay ku jiraan gaadiid loo soo raaco iyo laga soo raacayo Xarunta Magaalada Markay arkaan tunnel -ka, waxay sidoo kale ku kaxayn doonaan waddada magaalada dhexdeeda Republika Srpska, oo aadan ku mari karin taraamka). Abriil 12-Oktoobar 2: maalin kasta 31: 09-00: 17; Nofeembar 00-Mar 1: maalin kasta 31: 09-00: 16. Madxafku wuxuu ku yaal albaabka Butmir ee tunnel -ka Sarajevo kaas oo, intii lagu jiray go'doominta Sarajevo, u adeegay sidii iskuxirka kaliya ee magaalada go'doonsan iyo hareeraysan dunida dibedda. Tunnel -ka oo ay qodeen ciidamadii Bosnia 00 -kii, ayaa ka tallaabay xayndaabkii UN -ka ee gegida dayuuradaha isagoo dhulka hoostiisa mariyay dhabaha ay diyaaraduhu ku ordaan oo dhererkiisu yahay 1993 mitir. Tunnel -ka ayaa oggolaaday in hub, saanado, saliid iyo raashin loo daabulo magaalada, wuxuuna u ahaa marin daadgureyn mas'uuliyiinta iyo dadka rayidka ah. Marxaladda dambe ee dagaalka, waxaa sidoo kale la rakibay dhuumaha saliidda iyo fiilooyinka korontada iyo isgaarsiinta. Marka laga reebo qayb yar oo ka mid ah tunnel -ka oo la booqan karo, madxafku wuxuu kaloo bixiyaa macluumaad aad u fara badan oo ku saabsan Siege of Sarajevo, oo leh waxyaabo farshaxan oo badan oo la soo bandhigay. Gelitaankii ugu dambeeyay 340 daqiiqo kahor xiritaanka (yacni 30:16). 30-5 KM. (la cusbooneysiiyay Agoosto 2020)
Hoolka carwada ee Matxafka Carruurnimada Dagaal.
Matxafka Carruurnimada Dagaal (Muzej ratnog djetinjstva), Logavina 32 (dhanka woqooyi uga soco bezestan ilaa aad ka aragto calaamada matxafka dhinaca midig ee wadada). 09: 00-20: 00. Waxaa la furay 2017, matxafka waxaa ku yaal waxyaabo shakhsiyadeed oo la soo bandhigay oo muujinaya khibrada carruurnimada intii lagu jiray Go'aankii Sarajevo. Tilmaamaha maqalka ayaa muujinaya sheekooyinka ka dambeeya walxaha, oo ku kaabaya bandhigyada sawirro dheeri ah, maqal iyo muuqaal. Markhaatiyada muuqaalka ah ee dadkii daganaa ee koray xilligii dagaalka ayaa sidoo kale lagu muujiyay booqashada oo dhan. Kaliya ku dhowaad 50 ayaa ku jira ururinta joogtada ah wakhti kasta, laakiin buugga Dagaal Caruurnimo waxay soo uruurisaa dhammaantood. Buuggu waa iib madxafka ama bilaash ayaa lagula tashan karaa qaybta maktabadda. 10 KM. (la cusbooneysiiyay Agoosto 2020)
Olol weligiis ah (Vječna vatra), Ferhadija (Banka, dhamaadka wadada Marsala Tita iyo bilowga wadada Ferhadija). 24/7. Goobta xusuusta loogu talagalay oo uu naqshadeeyay naqshadeeyaha Juraj Neidhardt, oo lagu sharfayo dhibbanayaasha Dagaalkii Labaad ee Adduunka oo leh olol weligiis ah iyo qoraal. Xuskaas waxaa loo hibeeyay 6-dii Abriil 1946-dii, sanad-guuradii koowaad ee ka soo wareegtay markii ay Sarajevo ka xoroobeen afartan sano oo ay qabsadeen Naasiyiintii Jarmalka iyo dowladdii faashiistaha ahayd ee Madaxa-bannaanayd ee Croatia. Bilaash (la cusbooneysiiyay Agoosto 2020)
Matxafka dambiyada ka dhanka ah aadanaha iyo xasuuqa 1992-1995 (Muzej zločina protiv čovječnosti i xasuuqii 1992-1995), Ferhadija 17 (Katedrala, ama sii wad wadada Ferhadija oo ka timaadda Sacred Heart Cathedral dhanka dabka ololkiisa weligiis ah, albaabka laga galo matxafku waa irridda bidix ee cidhiidhi ah). 09: 00-22: 00. Matxaf yar oo ku saabsan xasuuqii ka dhacay Dagaalkii Sokeeye ee Bosnia ee 1992-95. Dhinaca samafalka ee iskahorimaadka waxaa lagu sawiray sawirro naxdin leh iyo qaybo filim ka hadlaya runta ceeriin ee xilligii ugu madoobaa ee taariikhdii ugu dambeysay ee Bosnia. Dheeraad ah 11/7/95 Sawirka, kaas oo diiradda saaraya xasuuqii Srebrenica gaar ahaan. Digniin: sawirada saxda ah iyo jajabka fiidiyowga ee xasuuqa ayaa laga yaabaa inay ka nixiso dhalinyarada soo booqata. La-talinta waalidka iyo ikhtiyaarka booqdaha ayaa lagula talinayaa. (la cusbooneysiiyay Agoosto 2020)
Galbeedka 11/07/95 (Galerija 11/07/95), Trg Fra Grge Martića 2 (Katedrala, oo ku xigta Katidralka Wadnaha Xurmaysan). 09: 00-22: 00. Matxaf yar oo qasab ah oo leh carwo joogto ah oo ku saabsan Xasuuqii Srebrenica, oo loogu talo galay in lagu xusuusto 8372 qof oo ku halaagsamay dhacdooyinkii Julaay 1995. Dhacdooyinka waxaa laga soo saaray aragtida saxafiyiinta baaritaanka ee booqanaya goobta xasuuqa. Hagaha maqalka (3 KM) waa mid aad loogu talin karo. Muddada booqashada, oo leh hage maqal ah, waa qiyaastii 60 - 90 daqiiqo. Digniin: sawirada saxda ah iyo jajabka fiidiyowga ee xasuuqa ayaa laga yaabaa inay ka nixiso dhalinyarada soo booqata. La-talinta waalidka iyo ikhtiyaarka booqdaha ayaa lagula talinayaa. 12 KM. (la cusbooneysiiyay Agoosto 2020)
Qabuuraha islaamka ee magaalada sarajevo
Qabuuraha. 24/7. Iyada oo ay ku jiraan dhagxaan cadcad oo marmar cad leh oo loogu talo galay kuwii naftooda ku bixiyey 20-jirkoodii intii lagu jiray dagaalka, qabuurahani waxay xusuusin u yihiin dhibaatadii magaalada soo martay wax ka yar labaatan sano ka hor. Dhowr xabaalo ayaa laga heli karaa magaalada oo dhan. Bilaash (la cusbooneysiiyay Agoosto 2020)
Toogte Alley (Snajperska aleja), Zmaja od Bosne (Katedrala). 24/7. Sniper Alley wuxuu ahaa magac aan rasmi ahayn ugu horreyntii waddooyinka Zmaja od Bosne Street (Dragon of Bosnia Street) iyo Meša Selimović Boulevard, boulevard weyn ee Sarajevo oo intii lagu jiray Dagaalkii Boosniya ay la socdeen xabad-laawayaal, waxayna noqotay sumcad xumo meel khatar u ah dadka rayidka ah si looga gudbo. Wadadu waxay iskuxiraa qaybta warshadaha magaalada (iyo sii soco, Madaarka Sarajevo) iyo goobaha dhaqanka iyo taariikhiga ah ee Old Town. Boulevard lafteeda ayaa leh dhismayaal dhaadheer oo badan oo siinaya toogteyaasha toogashada dhul ballaaran oo dab ah. Calaamadaha lagu akhrinayo "Pazi - Snajper!" (“Iska ilaali - toogte!”) Caan baa noqotay. Dadku waxay ku ordi doonaan orod wadada dhinaceeda ah ama waxay sugi lahaayeen gawaarida gaashaaman ee Qaramada Midoobay wayna daba socon doonaan iyaga, iyagoo u adeegsan doona gaashaan. Sida laga soo xigtay xog la ururiyey 1995, toogteyaashu waxay dhaawaceen 1,030 qof waxayna dileen 225 - 60 oo ka mid ah ay carruur ahaayeen. Bilaash (la cusbooneysiiyay Agoosto 2020)
Xuska Caruurta Sarajevo, Maršala Tita (Park). 24/7. Taallo loo dhisay 2009 by farshaxan Mensud Kečo oo loogu talagalay carruurta 1,600 ee la dilay intii lagu jiray go'doominta Sarajevo. Taallada ayaa ku taal Veliki Park, waxayna ka kooban tahay muraayad muraayad ah oo lagu dhisay iyadoo la is dulsaarayo lakabyo muraayad cagaaran ah oo shaqsi ahaan loo jarjaray oo wadar ahaan dhererkoodu yahay 5 m, waana dhexroorkeeda 1.7 m Sannadkii 2010, magacyada 521 carruur ah ayaa lagu qoray toddobo silsiladood oo aluminium ah oo la suuxiyay waxaana la saaray silsilad la taaban karo oo ku wareegsan sawirka. Bilaash (la cusbooneysiiyay Agoosto 2020)
Matxafka Taariikhiga ah ee Bosnia (Historijski muzej), Zmaja od Bosne 5 (Muzeji),, lacag la'aan: + 387 33 210 416. 09:00 - 19:00. Madxafka waxaa la aasaasay 70 sano ka hor, laakiin waxaa si aad ah u waxyeeleeyay duqeymaha intii lagu jiray dagaalka oo wali ku jira xaalad weligeedba sii xumaaneysa. Bandhigyadu waxay ugu horreyn diiradda saarayaan dagaalka, laakiin soo bandhigida alaabtan ayaa ah mid gabowday, matxafkuna guud ahaan malaha wax ka kooban. Qaar ka mid ah bandhigyada ayaa mudan in la booqdo, ugu yaraan haddii aad awoodid inaad la qabsato sawirrada muwaaddiniinta naafada ah ka dib madaafiic lagu garaacay suuqyada iyo sawirrada UN aan waxtar lahayn oo siinaya gawaarida gaashaaman muwaadiniinta ayaa sugi kara inta ka horreysa ka hor inta aan qatarta dabka snipper loo gudbin wadada. Si kastaba ha noqotee, Matxafka 11/7/95 iyo Matxafka Carruurnimada Dagaalku wuxuu bixiyaa waxyaabo la mid ah qiime aad u wanaagsan. 5 KM. (la cusbooneysiiyay Agoosto 2020)
Matxafka Guutada Gawaadhida 105aad (Muzej 105. guutada gawaarida), Grdonj. TF 12: 00-22: 00; Sabti ilaa Axad 10: 00-22: 00. Xusuusin loogu talagalay Guutada 105aad ee Ciidanka Boosniya, oo ka qayb qaatay difaaca Sarajevo intii lagu jiray go'doomintii 1992-95 ee magaalada. Laga soo bilaabo 1993, in ka badan 7,000 xubnood ayaa soo maray guutada, kuwaas oo 312 ka mid ah lagu diley ficil halka in ka badan 2,000 la dhaawacay. Matxafku wuxuu ku yaalo munaarad la dayactiray oo ku taal Pointy Rock. (la cusbooneysiiyay Agoosto 2020)
Galbeedka Qaranka (Umjetnička galerija), Zelenih beretki 8,, lacag-la'aan: + 387 33 266-551. M-Sa 10: 00-20: 00. Waxaa la aasaasay 1946 Dagaalkii Labaad ee Adduunka kadib, Xarunta Qaranka ayaa ka kooban in ka badan 6000 qaybo farshaxan ah, iyadoo diiradda la saarayo shaqooyinka danaha Bosnia. Waxa xiisaha lihi waxa weeye, madxafku wali wuu furan yahay oo wuxuu qabtay carwooyin intii lagu jiray Go'aankii Sarajevo. Waxaa la xiray 2011 oo dib loogu furay dadweynaha 2012. Bandhigga joogtada ah, Isdhexgalka Booska, wuxuu iftiiminayaa nolosha Bosniya dhan kasta. (la cusbooneysiiyay Agoosto 2020)
Madxafka Suugaanta & Farshaxanka (Muzej književnosti i pozorišne umjetnosti), Sime Milutinovića Sarajlije 7. Isniinta ilaa Jimcaha 8: 00-19: 00; Sa 12: 00-20: 00. Matxaf yar oo loogu talagalay muhiimadda suugaanta iyo farshaxanka muujinta ee Sarajevo, iyada oo fiiro gaar ah loo leeyahay qorayaasha iyo abwaannada caanka ah ee maxalliga ah. Booqasho mudan mudan kuwa xiiseeya fanka iyo suugaanta. 3 KM. (la cusbooneysiiyay Agoosto 2020)
Matxafka Farshaxanka casriga ah (Ars Aevi), Terezija bb (Skenderija). Madxaf loogu talagalay farshaxanka casriga ah. Waxaa la sameeyay xilligii dagaalka "iska caabinta dhaqanka". Waxay leedahay qiyaastii 130 shuqul oo ay sameeyeen farshaxanno caan ah oo adduunka ah oo ay ka mid yihiin rinji-yahanka Talyaaniga iyo farshaxanka farshaxanka Michelangelo Pistoletto, farshaxanka Griigga ah Jannis Kounellis, farshaxanka wax-qabadka Jarmalka iyo farshaxanka Joseph Beuys, iyo farshaxanka fikradda Mareykanka ee Joseph Kosuth. Dhisme cusub oo matxaf ah, oo uu naqshadeeyay naqshadeeyaha reer Talyaani ee Renzo Piano, ayaa la qorsheynayaa in la dhiso sannadaha soo socda. (la cusbooneysiiyay Agoosto 2020)
Guriga Despić (Despića kuća), Despićeva 2. Isniinta ilaa Jimcaha 10: 00-18: 00, Sa 10: 00-15: 00, Su way xiran tahay. Ku tiirsanaanta Matxafka Magaalada Sarajevo, oo lagu dhisay dhowr marxaladood xilliyado kala duwan, qaybaha ugu da'da weyn ee dib ugu laaban jiray qarnigii 17aad. Hantida waxaa iska lahaa qoyska taajiriinta ah ee reer Sabtiga ah ee Orthodox Christian Despić, oo guriga ugu deeqay magaalada, taas oo ka dhigtay Matxafka Suugaanta iyo Farshaxanka. Waxay caan ku noqotay goobta lagu qabtay bandhiga tiyaatarka ee ugu horreeyay magaalada, sidaa darteed waxaa loo qaadan karaa inay tahay horudhaca tiyaatarka casriga ah. Si wada jir ah ula leh guriga Svrzo, guriga Despi presents wuxuu martida u soo bandhigayaa qaab nololeedka qoysaska ganacsatada hodanka ah ee ka qayb qaatay koritaanka iyo barwaaqada Sarajevo. (la cusbooneysiiyay Agoosto 2020)
Akadeemiyada Farshaxanka Fiican.
Akaademiga Fanka Farshaxanka (Akademija scenskih umjentosti), Obala Maka Dizdara 3. Akadeemiyada Farshaxanka ee Sarajevo waa kuliyado ka tirsan Jaamacadda Sarajevo oo ku taal Sarajevo, Bosnia iyo Herzegovina, oo loogu tala galay bandhig faneedka. Waxaa si rasmi ah loo furay 1981 iyada oo la furay waaxda jilitaanka. Sannadkii 2010, waxaa lagu dhawaaqay in Sarajevo Canton iyo Machadka Horumarinta Cantonal ay maalgelin doonaan dhismaha 10 milyan oo KM dhisme iyo xarun Akadamiga Farshaxanka, ugu horreyn maxaa yeelay xaaladaha shaqada ee ardayda iyo macallimiintu way liiteen tobankii sano ee la soo dhaafay. . Dhismaha xarunta cusub ee ah 4,600 m² (49,514 sq ft) ayaa laga bilaabay bartamihii sanadkii 2010-ka xarunta dowladda hoose ee Centar. Dhismaha hadda (duugga ah) ee ku yaal daanta koonfureed ee wabiga Miljacka waxaa la dhisay 1899 oo ah Kaniisadda Evangelistic sida ku xusan naqshadda Karl Pařík. (la cusbooneysiiyay Agoosto 2020)
Buundada Festina Lente (Festina Lente Inta badan), Obala Kulina bana (Akadamiga hortiisa). 24/7. Buundo casri ah oo dhererkeedu yahay 38 m oo dul marta Miljacka, oo ku taal marin aan caadi ahayn dhexda. Waxaa jira kuraas looqeybsiga ah, oo ku martiqaadaya socotada inay fariistaan ​​oo ay ku raaxeystaan ​​aragtida. Fikradda buundada waxaa abuuray saddex arday oo ka socda Akadeemiyada Farshaxanka Fiican: Adnan Alagic, Amila Hrustić iyo Bojana Kanlic. Wuxuu si rasmi ah u furmay 22 Ogosto 2012. Bilaash. (la cusbooneysiiyay Agoosto 2020)
Machadka Bosniak (Bošnjački institut), Mula Mustafe Bašeskije 21. 08: 00-16: 30. Machadku waa xarun dhaqameed diiradda saareysa dhaqanka Bosniak. Waxaa aasaasay madaxweyne ku xigeenkii hore ee Bosnia Adil Zulfikarpašić. Machadku wuxuu ku yaal qubeyska Turkiga ee qarnigii lix iyo tobnaad ee la dayactiray waxaana ku jira maktabad iyo xarun farshaxan. (la cusbooneysiiyay Agoosto 2020)
Dhismaha Madaxtooyada (Zgradu Predsjedništva Bosne i Hercegovine), Maršala Tita 16. Dhismaha Dowlada Territorial (maanta, hoyga rasmiga ah ee Madaxtooyada Bosnia iyo Herzegovina) waxaa naqshadeeyay Josip Vancas waxaana la furay bishii Maarso 1886. Dhismaha waxaa loo qaabeeyey ka dib markii loo magacaabay Florentine Medici Ricardi Palace. oo ka tarjumeysa qaabka Renaissance Early Florentine. Waxay sidoo kale ku taal Maxkamadda Dastuuriga ah ee Bosnia iyo Herzegovina (Ustavni sud Bosne iyo Hercegovine) iyo Archives-ka Bosnia iyo Herzegovina. (la cusbooneysiiyay Agoosto 2020)
Dhismaha Golaha Baarlamaanka (Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine), Trg Bosne iyo Hercegovine 1 (guud ahaan Xarunta Magaalada Sarajevo),, fax: + 387 33 233 480. Dhismaha Golaha Baarlamaanka ee Bosnia waxaa dib loo bilaabay 1954, oo uu naqshadeeyay naqshadaha dhismaha Juraj Neidhard (oo ahaa sokeeye dhow Le Leb), ugu dambayntiina la dhisay intii u dhaxeysay 1978–1982. Waqtigaas la dhammeeyay, dhismaha Golaha SRBiH wuxuu ahaa dhismaha kaliya ee ujeedadaas laga lahaa qaybtaan ka mid ah Yurub oo loogu talagalay qaab casri ah. Sidoo kale waxaa ku yaal Golaha Wasiirada ee Boosniya iyo Agaasinka Isdhexgalka Yurub. Dhismuhu wuxuu noqday astaanta Go'doominta Sarajevo ka dib markii ay duqeeyeen madaafiicdii Serb isla markaana la sawiray intii uu dabku socday 1992. (la cusbooneysiiyay Agoosto 2020)
guri nagaadi (Rezidencija “Konak”), Ulica Konak 5. Konak waxaa loo dhisay sidii degganaantii Ottoman degenayd 1868 qaabkii loo yaqaan 'Late Baroque' intii lagu jiray xukunkii Topal Osman Pasha, oo ahaa vizier Ottoman. Waxaa lagu dhisay goob hore guri nagaadi (degaan rasmi ah oo ka tirsan Boqortooyadii Cusmaaniyiinta). Laga soo bilaabo 1878 ilaa 1918 xiligii Austro-Hungaria qabsashadeeda Konak waxay ahayd hoyga reer Habsburg, iyo Emperor Austro-Hungaria Emperor Franz Josef wuxuu degenaa Konak intii uu ku guda jiray booqashadiisii ​​bishii Meey, 1910. Xilligii Jamhuuriyadda Yugoslav (1918 ilaa 1941) Konak waxay martigalisay janaraalada, gudoomiyeyaasha, gudoomiyeyaasha degmooyinka iyo siyaasiyiin badan oo ka kala yimid daafaha dunida. Maanta, waa degenaansho dowladeed oo ay isticmaalaan xubnaha Madaxtooyada Bosnia iyo Herzegovina. (la cusbooneysiiyay Agoosto 2020)
Gudaha Austro-Hungary ee caadiga ah ee Xafiiska Dhexe ee Boostada
Xafiiska Dhexe ee Boostada (BH Posta), Obala Kulina bana 8. 7: 00-20: 00. Xafiiska boostada xilligii Austro-Hungaria, oo uu naqshadeeyay naqshadeeyaha reer Czech Josip Vancas, oo la furay 1913. Waa dhisme taallo leh albaabbo dhaadheer oo ku hogaaminaya martida martigalinta qaab-dhismeedka caadiga ah ee loo yaqaan 'Secession style', oo leh waxyaabo qurxin u eg oo u eg xafiiska boostada ee Vienna. Waxay waxyeello soo gaadhay bishii Meey 1992 intii lagu jiray go'doominta Sarajevo, laakiin dib ayaa loo soo celiyay 2001 iyada oo ay kormeerayaan naqshadeeyaha dhismaha Ferhat Mulabegović. Bilaash (la cusbooneysiiyay Agoosto 2020)
Masaajidka Bey (Begova dzamija), Saraci 8 (oo ku taal bartamaha Bascarsija). 09: 00-19: 00. Dhismahan casriga ah ee Ottoman ee luulku waa meel qurux badan oo la booqdo. Waxay u furan tahay muslimiinta iyo dadka aan muslimka ahayn, laakiin haweeneyda soo booqaneysa waxay u baahan tahay inay timaheeda daboosho oo ay xirto goonno dheer ama dharka masaajidka dhexdiisa. Waa mid ka mid ah masaajidda ugu waaweyn gobolka, qaar badanna, waa kuwa ugu qurxoon. Masaajidka Bey wuxuu jiraa dhowr boqol oo sano waana mashruucii ugu weynaa uguna muhiimsanaa ee waqfkii Bey kaasoo lagu aasay barxada masjidka. Taarikada saacadda ee ku xigta goobta (guud ahaan waddada Mudželiti Veliki) waxay muujineysaa 12:00 qorrax dhaca, waxaana loo isticmaali jiray in lagu waafajiyo wicitaannada salaadda ee dhammaan masaajidda magaalada. Tigidhka lagu galo masaajidka ayaa sidoo kale marin u ah madxafka ka soo horjeedka wadada. 5 KM. (la cusbooneysiiyay Agoosto 2020)
Masaajidka Emperor (Careva dzamija), Obala Isa-bega Ishakovića (dhinaca koonfureed ee wabiga). Kani waa masaajidka ugu faca weyn Sarajevo, waa kii ugu horreeyay ee la dhiso sanadkii 1457 kadib markii Cusmaaniyiintu qabsadeen magaalada. Waa masaajidka ugu weyn ee hal-hoosaad ee dalka ku yaal, oo lagu dhisay kormeerkiisa Isaković-Hranušić oo u hibeeyay suldaan Mehmed Guulihii. Waxaa la burburiyey dhammaadkii qarnigii 15aad laakiin dib ayaa loo dhisay 1565 waxaana loo hibeeyey waqtigan Suleyman the Magnificent. Masaajidka ayaa mar labaad waxyeello ka soo gaadhay Dagaalkii Labaad ee Adduunka oo ugu dambaysay intii lagu jiray Dagaalkii Sokeeye ee 1992-95, iyo dib u soo celinta ku saabsan qurxinta rinjiga iyo gudaha ayaa wali la sugayaa. Qabuuraha ku dhow ayaa martigaliya qabuuraha magaalooyin badan oo hore loo yaqaan 'viziers', mullahs, muftis, sheikhs oo ah shakhsiyaad kale oo caan ah oo taariikhi ah oo ka tirsan Sarajevo. Waxa kale oo jira kafateeriyada gidaarka gudihiisa. Masaajidku wuu u furan yahay muslimiinta iyo dadka aan muslimiinta ahaynba, laakiin haweeneyda soo booqaneysa waxay u baahan tahay inay timaheeda daboosho oo ay xirto goonno dheer ama dharka masaajidka dhexdiisa. (la cusbooneysiiyay Agoosto 2020)
Masjidka Ali Pasha (Alipašina džamija), Hamze Hume. Masaajidka waxaa la dhisay intii u dhaxeysay 1560-61 isagoo loo yaqaan 'vakıf' (dhaxal ama hadiyad daa'in ah) Sofu Hadım Ali Pasha, gudoomiyihii hore ee Cusmaaniyiinta Bosnia Eyalet ee Boqortooyadii Cusmaaniyiinta, kadib dhimashadiisii ​​Sebtember 1560. Waxaa loo dhisay sida caadiga ah Qaab dhismeedka Istanbul. Qubarku wuxuu daboolayaa aagga salaadda iyo seddex domes oo yaryar ayaa daboolaya khariidadda. Qiyaas ahaan darajooyinkeeda sharafta leh waxay taagan tahay xagga sare ee cabirka dhammaan masaajidyada sub-dome ee laga dhisay Bosnia iyo Herzegovina. Qaab dhismeedka dhismaha waxaa ku yaal goob duug ah (turbe) oo leh laba sarcophagus oo ah Avdo Sumbul (d.1915) iyo Behdžet Mutevelić (d.1915), dhaqdhaqaaqayaasha Gajret oo ku dhintay godadkii Arad. Masjidka waxaa si weyn u waxyeeleeyay ciidamada Serbia intii lagu guda jiray iskahorimaadkii horaantii 1990, gaar ahaan qubbada. Dayactirkii ugu dambeeyay ee masjidka wuxuu dhacay 2004 iyo bishii Janaayo 2005, Gudiga ilaaliya xusuusta Qaranka ayaa soo saaray go'aan ah in lagu daro Masjidka Ali Pasha liiska Taalladaha Qaranka ee Bosnia iyo Herzegovina. (la cusbooneysiiyay Agoosto 2020)
Masaajidka Ferhadija (Džamija Ferhadija), Ulica Zelenih Beretki (u soco wadada Ferhadija dhanka galbeed). Masaajidka waxaa loogu magac daray Ferhad Bey Vukovic Desisalic, oo reer Bosnia ah Sanyak Bey, oo masaajidka la dhisay 1562. Cilmi baaris qadiim ah oo lagu sameeyay qurxinta rinjiga ku dhex jirta masjidka, oo la qabtay intii u dhaxeysay 1964 iyo 1965, ayaa waxaa ka soo muuqday 6 lakab oo rinji ah oo ka soo kala jeeda waqtiyo kala duwan. Lakabka ugu da'da weyn uguna qiimaha badan, ee laga helo qubbada weyn, waxaa iska leh koox loo yaqaan qurxinta Rumi, waxayna taariikhdeedu ahayd qarnigii 16aad. Masaajidka agtiisa waxaa ku yaal qabuuro yar, halkaas oo lagu aasay xubno ka tirsanaa Janissary Order iyo qoysaskii hore ee Sarajevan. (la cusbooneysiiyay Agoosto 2020)
Qabriga toddobada walaalo (Jedileri), Bistrik 8 (raac baska 103 ilaa terminus) Trg Austrije),, lacag-la'aan: +387 33 71 28 01. Taariikhda qabrigu waxay soo bilaabmaysaa xilliyadii la aasaasay Sarajevo, waxaana loo malaynayaa in sheekh gaar ah oo la yimid ciidankii Sultan Mehmed II el-Fatih uu ahaa kii ugu horreeyay ee lagu aaso goobtan. Sheekhu wuxuu dhisay gurigiisa agtiisa qabriga hadda, wuxuuna dardaarankiisa ku codsaday in lagu aaso salka beertiisa, iyadoo meelaha hadhay loo isticmaali doono qabuuraha Muslimiinta. Goor dambe, laba darwiish ayaa sidoo kale halkan lagu aasay, oo si been abuur ah loogu eedeeyay inay dahab ka xadeen qasnadda Sarajevo sanadkii 1494. In ka badan laba qarni ka dib, 4 taliye ciidan oo lagu eedeeyay inay iskaashi la sameeyeen Amiir Eugene oo ka tirsan Savoy markii ay weerareen magaalada, ayaa sidoo kale la aasay. qabriga ka dib, sida ku xusan halyeeyga, a iftiinka jannada dusheeda ku soo degtay qabrigooda iyagoo daliil u ah dembigooda. Sidaas darteed, qabrigu wuxuu mideeyaa 7-da shaqsi, ee kala ah walaalayaal iimaan halkii ay walaalo ku dhalan lahaayeen. 1815 gidaar ka kooban toddobo daaqadood ayaa laga dhisay hareeraha qabriga, qol loogu tala galay in lagu ilaaliyo qabriga ayaa lagu daray. Qaar ka mid ah hantidaas ayaa la dumiyey sanadkii 1937, laakiin derbigii iyo qabrigii ayaa ilaa maanta taagan. (la cusbooneysiiyay Agoosto 2020)
Tekke ee Xaaji Sinan (Hadži Sinanova tekija), Ulica Alije Đerzeleza 1. Khamiista: 19:00 - 22:00. Tekke waxaa dhisay Hadzi Sinan Aga, oo ah ganacsade taajir ah kana soo jeeda Sarajevo, ama wiilkiisa Mustafa-Pasha, oo ahaa silahdar (sarkaal mas'uul ka ah hubka) Maxkamadda Murad IV Sultan, laga soo bilaabo 1638 ilaa 1640. tekke wuxuu ka kooban yahay dhowr qol: qol zikr (Salaada Dervish) ayaa la sameeyaa, halka sheekhu degan yahay, musafirhana (hudheelka martida) iyo aag lagu qaxweeyo. Marka lagu daro caadooyinka caadiga ah ee loo yaqaan 'Dervish rituals', tekke wuxuu soo ururiyay Sufis (suugaan), oo ku dhaqma tesavuf (mysticism) wuxuuna bartay shaqooyinka luqadaha Faarisiga, Turkiga iyo Carabiga. In ka badan boqol qoraallo ayaa lagu keydiyey boggan. Soojiidashada muuqaal ahaaneed ee ugu weyn ee Sinan Tekke waa naqshadaha naqshadeynta ee derbiga barxadda, oo loo yaqaan "Khatimidii Suleymaan", naqshadda rosette waxay ku dhowdahay saddex mitir oo ay ku qoran tahay "Ilaah mooyee Ilaah kale ma jiro, Muxammadna waa Rasuulkiisa", lagu rinjiyeeyay 12 jeer qaabka fresco. Sanadkii 1768, magangalyadi ugu horeysay ee bukaanka dhimirka waxaa laga furay xaafada 'Sinji's Tekke', taas oo ka dhigan bilowga daryeelka caafimaadka abaabulan ee BiH. (la cusbooneysiiyay Agoosto 2020)
Hanikah (Gazi Husrev-begova Hanikah), Ulica Sarači 49. Boos celinta ayaa lagula talinayaa. Ghazi Husrev-Bey's Hanikah (khanaqah (خانقاه, “tekke Dervish” ah oo Faarisi ah; Xarunta Suufiyada ee barashada tasawwuf (Suugaanta islaamka) ama hoyga suufiyada ee dervishes labaduba ku noolaayeen oo ay ku heleen waxbarashadooda aragtida ah)) waxaa la dhisay 1531 oo ah dhisme u eg qaab leykul ah oo cabirkiisu yahay 31.60 x 16.60 mitir oo leh 14 qol oo daraasad ah, a simahana (qol loo isticmaalo dhaqan diimeed Dervish ah oo loo yaqaan zikr), mihrab (niche semicircular niche ee darbiga tilmaamaya qibla) iyo il yar oo loo yaqaan 'sacadvan' (شاذروان shadirvan) dhexda barxadda gudaha. Waxay ahayd dhisme qurux badan atrium leh tiirar iyo porticos, kuwaas oo qayb ahaan ama gebi ahaanba la burburiyey ama la gubay, dib loo dhisay oo wax laga beddelay marar badan intii ay jirtay. Sanadkii 1931, markii dhisme cusub oo Madarasad ah la dhisay, wuu joogsaday, oo inbadan oo dhismaha ah ayaa la dumiyey. Dib-u-dhiska Hanikah waxaa la dhammaystiray 1998, dhismaha maanta la joogo badiyaa waa nuqul kii hore, marka laga reebo saqafka sare ee loo yaqaan 'plexiglass'. (Sidoo kale, ma jiraan wax dukumiinti ah oo ku saabsan qiiqa hareeraha, kuwaas oo loo sameeyay si la mid ah kuwii Gazi Husrev-beg medresa (albaabka xiga tan iyo 1537), iyo taariikhda (chronogram) korka albaabka laga soo galo marka lagu daro qurxinta stalactite ee wajiga laga yaabo in aan dib loo soo celin.) (la cusbooneysiiyay Agoosto 2020)
Intii lagu guda jiray xukunkii Cusmaaniyiinta ee Sarajevo, 13 buundo ayaa laga dhisay Webiga Miljacka iyo Webiga Bosna. Afarta buundo dhagax ayaa hadhay: the Buundada Latinka, ka Buundada Šeher-Čehajina, ka Buundada Ri iyo Buundada Roman.
Buundada Latin-ka xilliga qaboobaha.
Buundada Latinka (Latinska ćuprija), Obala Kulina Bana. 24/7. Archduke oo ka tirsanaa boqortooyadii Austro-Hungaria, Franz Ferdinand, ayaa lagu dilay buundadan 28-kii Juunyo 1914, taasoo dhalisay bilowgii Dagaalkii Koowaad ee Adduunka Xusuus-qor dhacdo lagu xuso. Buundada waxaa lagu xasuustaa gacan ku dhiigle Gavrilo Princip, laakiin waxaa laga saaray intii lagu jiray Dagaalkii 1992-1995. Bilaash (la cusbooneysiiyay Agoosto 2020)
Buundada Šeher-Čehajina (Šeher-Ćehajina ćuprija) (inta udhaxeysa Golaha Magaalada iyo Guriga Cunista). 24/7. Waxaa la dhisay 1585/1586 wuxuuna ka badbaaday burburka weyn ee daadadka 1619, 1629, 1843 iyo 1880, laakiin dib ayaa loo hagaajiyay markasta. Markii Wabiga Miljacka la xannibay 1897 si loo jaangooyo socodka biyaha, webiga wejigiisa waa la beddelay oo mid ka mid ah 5tii qaanso ee aasaasiga ahayd ee buundada dhinaca bidix ayaa la aasay, isbeddel khiyaano leh oo ay indha indheeyaashu wali ku arki karaan. Sida ku xusan halyeeyga, waziirka magaalada Hadzi Husein ayaa amar ku bixiyay in la dhiso buundada oo dheeman lagu dhejiyo mid ka mid ah tiirarkeeda si loo maalgeliyo dayactirka mustaqbalka. Habeen baa dheemankii la waayey, nin miskiin ah oo dhalinyaro ah ayaa qirtay inuu u xaday hadiyad ahaan gabar uu jeclaaday. Naxay jacaylka ka dhexeeya labadooda iyo soo noqoshada dheeman, ayaa ninki laga sii daayay xabsiga, laakiin dheeman waligiis dib uguguma soo noqon buundada. Sannadkii 2005-tii, Guddiga Ilaalinta Tilmaamyada Qaranka ayaa ku dhawaaqay buundada inay tahay Taallo Qaran oo ay leeyihiin Bosnia iyo Herzegovina. Bilaash (la cusbooneysiiyay Agoosto 2020)
Buundada caanka ah ee Ri'da
Buundada Roman (Rimski badanaa) (wadada Bosna ee udhaxeysa Ilidza iyo guga Bosna). 24/7. Ka gudubka Wabiga Bosna ee laga galo iridda taariikhiga ah ee Galbeed ee laga soo galo magaalada. Waa buundada kaliya ee dhagaxa ah ee la ilaaliyo eek u taal Webiga Bosna, waxaana loo tixgeliyaa mid ka mid ah buundooyinka Cusmaaniyiinta ee ugu saxsan dalka. Buundada waxaa la dhisay mararka qaar intii u dhaxeysay 1530 ilaa 1550 iyadoo la isticmaalayo hoobiye lime iyo dhagaxyo ka yimid degsiimadii hore ee neolithic, Illyrian iyo Roman ee agagaarka buundada, tan ugu muhiimsanna waa tuulada Roman Aquae Sulphurae (Latinka biyaha baaruudda) oo ahayd xarunta dhaqanka iyo maamulka gobolka. Waxyaabo badan oo qadiimiga ah oo laga helay xilligaas (dahabka, qadaadiicda, dhoobada iwm) xilligii Roomaanka ayaa laga helay buundada. Waxay leedahay toddobada qaansoley wareega ah waxaana laga dhisay dhagax xardhan, oo wadar ahaan dhererkeedu yahay 52 m, ballaciisuna yahay 4.55 m iyo barta ugu sarreysa ee 4.5 m oo ka saraysa heerka biyaha. Qaar ka mid ah marmarka dhagaxa (kaldrma) waxay leeyihiin xardho gacmeedyo asal ahaan ka soo jeeda Roman, kuwaas oo buundada ay ka soo qaadatay magaceeda. Bilaash (la cusbooneysiiyay Agoosto 2020)
Buundada Ri’da (Kozija ćuprija) (raac Dariva socod-socodka dabiiciga ah ee Bariga laga bilaabo Aqalka Dawladda Hoose illaa buundada). 24/7. Buundo qaab dhismeedka xiisaha badan leh ee laga galo irida hore ee taariikhiga ah ee laga soo galo magaalada. Waxay lahayd shaqo xafladeed oo muhiim ah, maadaama ay u adeegtay sidii goob kasta oo vizier Ottoman ah ay ku soo dhaweyn jireen vizierkii hore iyo muwaadiniinta Sarajevo. Buundada waxaa laga dhisay marmarka cad, waxay leedahay hal qaanso oo leh labo waardiyo wareegsan, dhererkeeduna yahay 42 m dhererkiisuna yahay 4.75 m. Taako of arc ugu weyn waa 17.5 m. Sida ku xusan halyeeyga, ka hor jiritaanka buundada, adhijir sabool ah ayaa arkay arigiisii ​​oo ku dhuuqaya geed ku yaal Webiga Miljacka. Markuu kormeeray geed-geed, wuxuu helay hanti ay ku jiraan qadaadiic dahab ah, oo uu ugu maalgelin jiray waxbarashadiisa. Ka dib markuu noqday maalqabeen iyo saamayn badan, wuxuu lahaa buundada laga dhisay geed yar oo ay riyihiisu ka heleen khasnadda, taas oo buundada u bixisay magaceeda. Runta ku jirta halyeeyga ayaa luntay taariikhda, laakiin buundada waxaa hubaal ah in la dhisay intii u dhaxeysay 1565 iyo 1579, waqti markii shabakada wadada ay soo martay casriyeyn weyn oo dhanka kaabayaasha ah intii lagu jiray xukunkii Mehmed-paša Sokolović. Bilaash (la cusbooneysiiyay Agoosto 2020)
Xaafadda Vratnik waxaa la dhisay qarnigii 18aad, agagaarka magaalada deyrka leh ee Vratnik. Darbiyada, irdaha, iyo qalcadaha ku teedsan wareega Vratnik waa la booqan karaa.
Qalcad Jaale ah (Žuta tabija) (Ku dhex soco qabuuraha dagaalka dhamaadka bari ee Bascarsija. Waddo kale waa in la raaco wabiga korkiisa; halka wadada fargeetooyinku ka qaataan, fargeeto midig (fargeeska bidix uu galo tunel gaagaaban); raac hoteelka agtiisa Sara iyo ilaa qalcadda.). Qalcadda Yellow (ama Yellow Bastion) waa qalcad yar oo madfac ku taal Jekovac. Waxaa laga dhisay meel u dhow Xerada Jajce iyo keydka biyaha Jekovac. Waxay u adeegtay sidii mid ka mid ah qodobadii difaaca ee ka dhanka ahaa ciidamadii Austro-Hungaria ee 1878. Qalcaddii ayaa waxyeello soo gaadhay oo dib loo dhisay dhowr jeer. Dayactirkii ugu dambeeyay wuxuu dhacay 1998. Waxay bixisaa aragti weyn magaalada. Miisaska jimicsiga oo leh muuqaal muuqaal ah ayaa bilaash lagu heli karaa, makhaayaddu waxay iibisaa cabitaanno laakiin kuwani waa qaali sidaa darteed waxaa lagugula talinayaa inaad soo qaadato cabbitaannadaada. Bilaash (la cusbooneysiiyay Agoosto 2020)
Burburka Qalcadda Cad, ee socdaalka xiisaha leh si uu u baadho.
Qalcad Cad (Bijela tabija) (raac wadada kore ee ka timaad Qalcadda Jaallaha ah, midig u qaad isgoyska oo fuula jaranjarada dhamaadka waddada, halkaas ka qaad midig ilaa aad ka soo gaadhayso dhufaysyada). 24/7. White Fortress waa madfac gantaal / qalcad dhufanayaal ah oo sidoo kale u adeegay in la dejiyo askarta, waana qayb ka mid ah Old Town "Vratnik". Waxaa loo maleynayaa in laga dhisay goobta magaalo yar oo dhexe "Hodidjed" (qalcad dhexe ee Vrhbosna Parish). Qalcadda ayaa iska indhatirta Sarajevo iyada oo leh aragtiyo layaableh oo laga soo galo bariga laga soo galo Sarajevo, wabiga Miljacka iyo magaalada lafteeda. Qalcadda Cad waxaa la dayactiray oo la ballaariyey dhowr jeer. Qaab dhismeedka maanta wuxuu ka soo bilaabmay xilligii Austro-Hungaria. Waxay u adeegtay god, xero, bakhaarro, sanduuqyo, iyo sidoo kale difaac ka dhan ah duullaankii Amiir Eugene ee Savoy sanadkii 1697, iyo qalcadda difaaca ee dagaalka lagaga soo horjeedo qabsashadii taliyihii Austro-Hungaria ee 1878. Naqshadeeyaha maxalliga ah, Zlatko Ugljen waxay soosaartay mashruuc dib u dhis fikradeed. Sida ku cad fikirkiisa halka loo isticmaali lahaa masraxa / masraxa xilliga xagaaga. Warbixinnada qaar ayaa ku taariikheeyay qalcaddii la dhisi lahaa illaa iyo 1550. Burburka ayaa bixiya muuqaal qurux badan oo magaalada ku saabsan, gaar ahaan qorrax-soo-baxa ama qorrax-dhaca, laakiin lama kormeero mana la shito. Waa suurtagal in lagu gaaro cirifka kore adoo ka baxaya "daaqadaha", laakiin ma jiro xayndaab ama tallaabooyin kale oo nabadgelyo. Markaad booqanayso qorrax ka soo baxa / qorrax dhaca waa lagugula talinayaa inaad keento toosh. Khataraha darteed, looguma talinayo carruurta da'da yar. Bilaash (la cusbooneysiiyay Agoosto 2020)
Iridda Visegrad (Višegradska kapija (Zidine Vratničkog grada)). Mid ka mid ah saddexda albaab-munaaradood ee ku yaal Vratnik Old Town. Waxaa la dhisay intii u dhaxeysay 1727 iyo 1739, nuuradda iyo dhagxaanta gaarka ah ee Boosniya hreša leh silsilado saqaf ah. Baabuurtu waxay u baxeen bariga iyagoo maraya wadada weyn ee aada dhanka Visegrad (sidaas darteed magaca) waxayna usii socdeen dhanka bari dhanka Istanbul. (la cusbooneysiiyay Agoosto 2020)
Ka eeg Sarajevo dhanka Qalcad Cad, Jajce Barracks bidix.
Matxafka Alija Izetbegović (Muzej Alija Izetbegović), Kapi-kula Ploča, Kovači. Apr-Sep: Isniinta ilaa Jimcaha 10: 00-18: 00, Sa 10: 00-15: 00; Oktoobar-Mar: Isniinta ilaa Jimcaha 10: 00-16: 00, Sa 10: 00-15: 00. Matxaf yar oo ku yaallay albaabbada hore ee magaalada Vratnik, Ploča iyo Širokac, oo loogu talagalay Alija Izetbegović, madaxweynihii ugu horreeyay ee waddanka madaxbannaan ee Bosnia iyo Herzegovina. Waxay leedahay maktabad ka shaqeysa Calija iyo waxyaabo shaqsiyadeed oo kooban oo la soo bandhigay. Dabaqa koowaad wuxuu martida ku qaadaa nolosha Alija, oo leh tabo iyo sawiro taariikhi ah, iyo abaalmarino iyo aqoonsi uu ka helay noloshiisa oo dhan iyo dhimashadiisa kadib. Marin udhaxeysa Ploča Gate iyo Širokac Gate waxay u heellan tahay doorka Alija ee taliyaha ciidanka. Qabrigiisa waxaa lagu booqan karaa qabuuraha ku dhow. (la cusbooneysiiyay Agoosto 2020)
Xabaasha Alija Izetbegović oo ku taal Qabuuraha Xusuusta Kovači goor fiid ah.
Qubuuraha Xusuusta Shuhadada Kovači (Sehidsko mezarje Kovaci), Sirokac (raac wadada Kovači wadada kore ee Sebilj). Qabuuraha oo ay ku jiraan dhibanayaashii dagaalkii sokeeye ee 1992-95, inta badanna lagu yaqaanay qabrigii Alija Izetbegović, madaxweynihii ugu horreeyay ee Jamhuuriyadda xorta ah ee Bosnia iyo Herzegovina (1992-1996) intaas ka dib wuxuu noqday madaxweynaha Bosnia iyo Herzegovina oo uu soo shaqeeyay ilaa 2003. Qabrigiisa, oo udub dhexaad u ah qabuuraha, wuxuu ka kooban yahay qubuuro laga laalay 8 tiir oo marmar ah, waana maalintii ilaalinteeda xubno ka tirsan ciidanka oo dhaqan ahaan ah, taas oo lagu xasuusto kaalintiisa taliyaha ciidanka. Bilaash (la cusbooneysiiyay Agoosto 2020)
Xeryaha Jajce (Jajce kasarna), Bijela česma (xagga kore kaga soo dhaqaaq Qalcadda Yellow oo jaranjarada midig u qaad ka hor Hoteelka Dhallinyarada Haris). Xero milateri oo loo dhisay 1914 baahida ciidanka Austro-Hungaria, horey loogu yaqiinay Eugen of Savoy. Magaca Jajce wuxuu ka bilaabmay 1915 markii isbitaalka militariga ee Austro-Hungaria loo raray xeryaha. Dhismuhu wuxuu si aad ah u burburay intii lagu jiray Dagaalkii Sokeeye ee 1992-95 welina lama soo celin, in badan oo ka mid ah waxay ku jiraan burbursan. Waa soo jiidasho caan ah sahamiyayaasha magaalooyinka. (la cusbooneysiiyay Agoosto 2020)
Sarajevo waxay martigelisay ciyaarihii Olombikada ee Jiilaalka 1984, si rasmi ah XIV Ciyaaraha Qaboobaha ee XIV. Waxay ahayd ciyaarihii ugu horreeyay ee qaboobaha ee lagu qabto dawlad hantiwadaag ah, iyo ciyaarihii olombikada guud ee labaad ee dawlad hantiwadaag ah kadib 1980kii Olombikada xagaaga ee Moscow. Kaabayaasha dhaqaalaha waxaa la soo dersay dhaqaale la’aan, danta guud oo hooseysa, iyo waxyeello ka soo gaadhay Dagaalkii Sokeeye ee socday 1992 - 95.
Matxafka Olombikada (Olimpijski muzej), Alipašina bb. Isniinta ilaa Jimcaha 09: 00-17: 00. Matxaf loogu talagalay ilaalinta xusuusta abaabulkii 1984 Olimbikada Jiilaalka ee Sarajevo. Laga soo bilaabo 1984 ilaa 1992, matxafku wuxuu ku yaalay bartamaha magaalada, guri weyn oo uu naqshadeeye naqshadeeyaha reer Czech Karl Paržik ee Nikola Mandić, muwaadin hore oo reer Sarajevo ah ka dibna madaxweynihii Jamhuuriyadda Madaxa Bannaan ee Croatia xilligii Naasiyiinta qabsadeen Dagaalkii Labaad ee Adduunka. Nikola Mandić oo lagu cadeeyay inuu yahay cadawga gobolka dhamaadka dagaalka, wuxuu naftiisa iyo hantidiisa ku waayey, waxaana qasrigaas ugu deeqay madxafka golaha deegaanka ee magaalada Sarajevo. Bilowgii Dagaalkii Sokeeye ee 1992-95, dhismaha waxaa madaafiic ku garaacay xoogaggii Serbia waxaana ku dhacay wax dayactir la’aan ah. Qayb muhiim ah oo ka mid ah ururinta matxafyada ayaa ololaysay. Ururinta soo hartay waa la badbaadiyey waxaana loo wareejiyey Dhismaha 'Zetra Olmypic Complex', iyo 2004 matxafka cusub ee ku yaal meesha uu hadda ku yaal ayaa la furay si loogu dabbaaldego sannad-guuradii 20aad ee Ciyaaraha Olombikada 1984. Waxyaabo badan ayaa loogu deeqay madxafka munaasabaddan, ururinta ballaaran ee la soo bandhigayana waxay ka dhalatay dadaallada dib u soo celinta ee daalka badan. (la cusbooneysiiyay Agoosto 2020)
Skenderija, Terezija BB (qaado taraamka 6 ilaa Joojinta Skenderija),, lacag-la'aan: + 387 33 211-016. Xarunta dhaqanka iyo isboortiga Tito-era ee ku taal daanta koonfureed ee wabiga, oo la dhisay 1969 laguna furay filimka dagaalka ee Neretva. Waxaa markii dambe loo ballaariyay ciyaarihii Olombikada ee Jiilaalka 1984, waxayna leedahay suuq iyo suuq laga dukaameysto. Sababtoo ah dhismaheeda la taaban karo, waxay kaliya haleeshay waxyeelo yar intii lagu jiray dagaalka, laakiin si tartiib tartiib ah ayey u xumaatay ka dib dayac dartiis. Bishii Febraayo 2012, ka dib markii baraf diwaan badani ka da'ay Sarajevo, saqafka mid ka mid ah hoolalka ayaa ku dumay cadaadiska barafka, kaas oo lagu qiyaasay inuu ahaa ku dhowaad 160 kg / m². Dhismaha ayaa markii dambe ay magaaladu dib u soo celisay oo ay ku soo noqotay adeeggiisii, waxaana soo booqda 500,000 oo qof sanadkii. (la cusbooneysiiyay Agoosto 2020)
Raad-raac Trebevic Bobsled, Apelova Cesta (Waxaad ku lugeyn kartaa halkan [6 km bartamaha, laakiin jiirad aad u adag) ama waxaad weydiisan kartaa taksi inuu kaa dejiyo Hoteelka Pino [8 km u jirta bartamaha, waxaad bixisaa qiyaastii 12-15 KM] ka dibna ka gudub wadada hoteelka .) Meesha ay ku tartamaan bobsled inta lagu gudajiray Ciyaaraha Olombikada 1984. Qayb burburay intii lagu jiray dagaalka. Meel yaab leh oo loogu talagalay dadka jecel inay arkaan burburka. Tani sidoo kale waa goob fiican oo loogu talagalay dadka khatarta gelaya: waxaad ka kireysan kartaa baaskiil magaalada dhexdeeda oo aad hoos ugu tagi kartaa dariiqa adag ee shabagga ah (ama hoos u fuul haddii aadan haysan baaskiil). (la cusbooneysiiyay Agoosto 2020)
Saldhiga Barafka (Wuxuu kudhow yahay bilowga wadada Trebevic bobsled track). Waxaa lagu burburiyey Dagaalkii, saldhigga sare ee wiishkii hore ee barafka ayaa aragti weyn ka leh magaalada oo dhan. Rajada dib-u-dhiska baaburka fiilada ayaa siyaasiyiintu ballanqaadeen sannado, laakiin weli ma dhicin. (cusbooneysiiyay Oktoobar 2015)
Muuqaal laga soo qaaday Avaz Twist Tower goor fiid ah.
Tilmaanta billaha ah ee magaalada Sarajevo “Sarajevo Navigator” waxay umuuqataa in sidoo kale laga heli karo khadka tooska ah (akhri-kaliya).
Avaz Twist Tower, Tesanjska 24a (Željeznička stanica, oo ku xigta saldhigga tareenka). 07: 00-22: 00. Dhismaha ugu dheer Yugoslavia-kii hore, oo dhererkiisu yahay 172 mitir magaalada korkeeda, iyo 11-ka munaaradood ee ugu muhiimsan adduunka. Dhismuhu wuxuu bilaabmay 2006 wuxuuna dhamaaday 2008. Munaaraddu waxay leedahay bar / makhaayad heer 35 ah, iyo goob indha indhayn oo ku taal bannaanka socodka lugta ee heerka 36, ​​oo bixisa aragti qurux badan oo magaalada ah, oo leh aragtiyo illaa garoonka diyaaradaha ah haddii cimiladu saamaxdo. Si aad u gaarto baarka / makhaayadda iyo dusha sare ee wax lagu fiirsado, wiishka hareeraha geeska laga galo hoolka laga soo galo oo u gudub heerka 35 (meesha jaranjarooyinku u socdaan sagxadda indha indheynta) Helitaanka baarka / makhaayada waa bilaash, laakiin marin u helka dusha sare ee indha indheynta waxay u baahan tahay lacag laga soo galo oo ah 1 KM. Albaabka marinku wuxuu qaataa oo keliya lacagta shilinka ah 1 ama 2 KM, laakiin biilasha waxaa lagu weydaarsan karaa baarka heerka 35. 1 KM. (la cusbooneysiiyay Agoosto 2020)
Dawaco sanduuq ku jirta, Sime Milutinovica 15 / I (Latinska ćuprija). 09: 30-22: 30. Ciyaaraha qolka caadiga ah ee ka baxsan qolka Sarajevo, oo xuddun u ah qufulada iyo furayaasha, oo bixiya 2 qol: Mr. Fox's Study Study Secret iyo The Job Job. Waxay ku taal meel u jirta bartamaha magaalada taariikhiga ah. 60 KM. (la cusbooneysiiyay Agoosto 2020)
Mr Fox ee Daraasada Sirta Ciyaartoyda ku meeleeya doorka wakiillada sirta ah ee barashada, kuwaas oo, shaqadii ugu dambeysay ee tababarkooda, u baahan inay ka baxsadaan xafiiska Mr. Fox iyagoo xallinaya halxidhaalayaal taxane ah.
Bangiga Shaqada shaqooyinka ciyaartooyda doorka tuugada iyagoo ka xadaya dheeman qiimo leh keydka bangiga oo leh maamule qalloocan. Awoodda bangiga ayaa la jaray saacad, ciyaarta ayaa ka dhici doonta mugdiga iyadoo toosh lagu kaashanayo.
Skakavac Waterfall (Vodopad Skakavac). Waterfall waxay dhacdaa 12 km waqooyi ee Sarajevo, oo ka koreysa Tuulada Nahorevo. Iyada oo dhererkeedu yahay 98 m, waa biyo-dhaca labaad ee ugu dheer Yurub, marka laga yimaado biyo-dhaca Vinnufossen ee Sunndal, Norway. Waxay ku taal aag qurux badan oo dabiici ah, oo ay ku hareeraysan yihiin keymo waaweyn oo dhir ah, beech, iyo kaymo beroosh ah, biyo-dhaca ayaa u qalma safar maalinle ah haddii hawadu saamaxdo. Buundada dadka lugaynaya ee alwaaxa leh waxay martida ku hoos marisaa biyo-dhaca. (la cusbooneysiiyay Agoosto 2020)
Ciyaaraha Olombikada (Željezničar Football Club), Olimpijski stadion Asim Ferhatović - Hase (Sarajevo Football Club). In kasta oo tayada kubbadda cagta ay yar tahay, haddana waxaa xiiso leh in la raaco ciyaar ka socota garoon lagu qabtay xafladdii furitaanka ee 1984 ee Ciyaaraha Jiilaalka ee Sarajevo si nabad ah dhawr sano ka hor intii aanu dagaalku qarxin. (la cusbooneysiiyay Agoosto 2020)
Mehndi, Halači (ka soco Sebilj ilaa webiga). 10:00 - 20:00. Dukaan lagu xardho taranka dharka oo loo adeegsado stencil dhejis ah iyo rinjiga dabiiciga ah ee dabiiciga ah si loo mariyo tattoos 5 ilaa 10 daqiiqo. Baahiyaha ca. 20 daqiiqo in la qallajiyo, ka dib xad-dhaafka waxaa lagu dhaqi karaa Sebilj. Waxay socotaa ugu yaraan 2 - 3 maalmood. 10 - 20 KM. (la cusbooneysiiyay Agoosto 2020)
Garoonka Grbavica, Zvornička 27. FK Željezničar Sarajevo (fudbalski klub Željezničar) (la cusbooneysiiyay Agoosto 2020)
Dariva waxay dhex martaa dooxada Miljacka
Dariva Canyon, Dariva (galbeedka Buundada Ri'da). 24/7. Safar dheer oo 8 km ah laga bilaabo bartamaha taariikhiga ah ee Sarajevo ilaa Buundada Ri'ga, oo la socota marinka Miljacka. Wadada socodku waa mid aad u qurux badan, wadada kaliya ee lugeynayaana waxay bixisaa aragtiyo dabiici ah oo aad uwanaagsan kuwaas oo la mahadiyey tan iyo markii ay Austro-Hungaria dhiseen tareen maraya dooxada Miljacka. Waxa jira 150 geed oo linden ah oo safka safka ku jira, oo ay beeray diblomaasiyiinta deggan Sarajevo oo casuumaad ka helay duqa magaalada. Qaar ka mid ah geedaha wali waxay leeyihiin astaamo ay ku qoran yihiin magacyada kuwii ku beeray. Bilaash (la cusbooneysiiyay Agoosto 2020)
Xadiiqadda idyllic ee gu'gii Bosna maalin xagaa ah.
Guga Wabiga Bosna (Vrelo Bosne), Ilidža (25-daqiiqo wadada galbeed ee Old Town, 3 km ka baxsan xaafada Ilidža). 08: 00-23: 00. Bilowga wabiga Bosna, halkaas oo biyaha nadiifka ah iyo kuwa qabow barafka ka soo baxaan buuraha. Halkaan waxaad ku dhex lugeyn kartaa baarkin ballaaran, firaaqo wanaagsan, oo aad maalintii oo dhan ku qaadan karto adiga oo aan caajis lahayn. 1 may xaflad ayaa lagu qabtaa halkan. 2 KM gelitaanka baarkinka, 2 KM / saacad dhigasho, 30 KM oo loogu talagalay faraska-iyo-gaari qaadista. (la cusbooneysiiyay Agoosto 2020)
Antilopes-ka Sarajevo Zoo.
Xayawaanka Sarajevo (Pionirska dolina), Patriotske lige 58,, fax: + 387 33 560 561. 08: 00-21: 15. Beer yar oo lagu nasto iyo jardiinooyin lagu nasto oo ku taal duleedka magaalada Sarajevo, ayaa ugu horreyn loogu talagalay carruurta. Waa xadiiqada ugu da'da weyn Bosnia iyo Herzegovina, xilligii Austro-Hungaria ee ku yaalay Ilidza laakiin markii dambe waxay u guurtay halka ay hadda ku taal. Waxaa jira 57 nooc oo xayawaan ah oo ka kala yimid daafaha dunida oo dhan, oo ay ku jiraan libaaxyo ay ku deeqday xadiiqada xayawaanada ee Sofia sanadkii 2013. Tareen yar iyo dhowr kale oo soojiidasho iyo garoonno cayaareed ah ayaa loo heli karaa madadaalo loogu talagalay carruurta, qaarkoodna lacag dheeraad ah ayaa laga qaadaa. . 3 KM dadka waaweyn, 2 KM oo loogu talagalay carruurta. (la cusbooneysiiyay Agoosto 2020)
Sunnyland, Miljevići bb (ka qaado baska 59a ee Latinska ćuprija ilaa Hambina carina, ka dib buurta kor u soco). 09:00 - 22:00. Waddo dhowaan la dhisay oo loo yaqaan 'bobsleigh track' oo ku taal Mt. Trebevic oo iska indhatireysa Sarajevo, iyo maqaayadaha ku dhow iyo baararka lagu iibiyo cunnooyinka iyo cabbitaannada dhexdhexaadka ah. Madadaalo aad u fiican oo loogu talagalay carruurta, oo leh garoonno lagu ciyaaro gudaha iyo tas-hiilaad, laakiin aan xiiso u lahayn dadka waaweyn. 5 KM. (la cusbooneysiiyay Agoosto 2020)
Sarajevo waa magaalo firfircoon oo sannadka oo dhan noosha. Sonar waxay soo aruurineysaa jadwalka joogtada ah ee dhacdooyinka magaalada si ay ugu fududaato qorsheynta booqashadaada.
Bandhig Faneedka Sarajevo, Branilaca Sarajeva 24 (Bosanski Kulturni Centar),, fax: + 387 33 263 381. Sannadle bishii Luulyo ama Ogosto. Mid ka mid ah ciidaha filimada ugu fiican Yurub iyo tan ugu weyn ee nooceeda ah ee Koonfur-bari Yurub. (la cusbooneysiiyay Agoosto 2020)
MESS: Bandhigga Tiyaatarka Caalamiga ah (Festival Internacionalni Teatarski), Maršala Tita 54,, fax: + 387 33 211 972. Sannad kasta bisha Oktoobar. Bandhig faneed muujiya, iyadoo si gaar ah isha loogu hayo dhalinyarada iyo maadooyinka kale. Lagu qabtay Kamerni teatar. (la cusbooneysiiyay Agoosto 2020)
Bandhiga Jazz Sarajevo, La Benevolencija 14,, fax: + 387 33 550 481. Toddobaadka koowaad ee Noofambar. Iid aad u fara badan, oo ah kii ugu weynaa ee noociisa ka dhaca Balkans.
Bandhiga Caalamiga ah ee Jiilaalka Sarajevo (Sarajevska zima), Maršala Tita 9a / V,, fax: + 387 33 266 621. Febraayo - Maarso sanad walba. Dhiggiisa Jiilaalka ee Bandhigga Filimka, oo leh qol loogu talagalay muusikada, farshaxanka muuqaalka ah, filimka iyo fiidiyowga, farshaxanka iyo suugaanta. Barnaamij gaar ah oo loogu talagalay carruurta ayaa la heli karaa. (la cusbooneysiiyay Agoosto 2020)
Habeenada Baščaršija (Baščaršijske noći), Cemalusa 1/2,, fax: + 387 33 207 972. Bisha Luulyo qaybteedii hore ee magaalada Sarajevo waxay noqotaa meel howlo kaladuwan leh: riwaayadaha tiyaatarka, riwaayadaha heesaha caadiga ah iyo kuwa dhagaxa weyn iyo qoob ka ciyaarka hidaha iyo dhaqanka. (la cusbooneysiiyay Agoosto 2020)
Bandhigga Gitaarka Caalamiga ah ee Sarajevo, Vijećnica, Obala Kulina bana. Sannadle bishii Abriil. Bandhigga Gitaarka Caalamiga wuxuu soo ururiyaa qaar ka mid ah ciyaartoy caan ah oo gitaarka ah, kuwaas oo ku soo bandhiga barnaamijyadooda farshaxanka iyo waxbarashada iyada oo loo marayo xaflado, aqoon isweydaarsiyo iyo tartamo. € 30- € 75. (la cusbooneysiiyay Agoosto 2020)
Sarajevo waxay siisaa fursado aad u fiican isboortiga jiilaalka, oo leh laba buurood oo darajada Olombikada u dhow
Bjelašnica. 09:00 - 16:00. Dalxiis barafka lagu caweeyo oo qiyaastii ah 35 km (1 saac oo baabuur ah) oo ka fog Sarajevo, oo leh 14 kiilo mitir oo heerar adag oo dhan ah. Kaadhka maalintii wuxuu u dhigmaa 25 KM carruurta iyo 35 KM dadka waaweyn. Barafka barafka ayaa sidoo kale suurtagal ah xilliga, loogu talagalay 18 KM dheeraad ah. (la cusbooneysiiyay Agoosto 2020)
Muuqaalka barafka Jahorina ee loo dalxiis tago xilliga jiilaalka.
Jahorina. Qiyaas ahaan inta ka fog Sarajevo sida Bjelašnica, meesha loo dalxiis tago ee Jahorina waxay ku taal soohdinta Bosnia iyo Herzegovina iyo Bosnia iyo Herzegovina, magaalada lafteedu waxay ku taal dhinaca Republika Srpska ee buurta. Dalxiisku wuxuu bixiyaa 25 kilomitir oo ka mid ah meelaha dhaadheer ee dhammaan heerarka dhibka iyo 11 wiish, oo wuxuu caan ku noqday goobta loogu talagalay tartannada Alpine ee Haweenka ee Ciyaaraha Olombikada 1984. Tigidhka maalintii waa 29 KM ee carruurta iyo 39 KM dadka waaweyn. (la cusbooneysiiyay Agoosto 2020).
Laga bilaabo Maajo ilaa Ogosto, marka heerkulka Sarajevo uu kacsan yahay, ma jirto hab ka fiican oo lagu qaboojiyo marka loo eego biyaha cad ee 12 ° C qabow ee Neretva. Neretva waa webi biyo cad ah oo ku yaal Herzegovina, waana mid ka mid ah meelaha ugu caansan ee loo raaco. Waxay bixisaa xawli aad u xiiso badan, kanaano, biyo nadiif ah oo nadiif ah, cabbitaan dabiici ah, xeebo waaweyn, kalluun, shimbiro, iyo adrenaline badan dabcan. Waxaa jira fursado dhowr ah oo loogu talagalay safarada safarada ee Sarajevo, oo ay kujirto u wareejinta / ka imaatinka barta laga bilaabo Kojic. Ha iloobin inaad wax ka weydiiso isku darka dalxiis dalxiis oo booqasho ku taga Tito keydkiisa oo ku teedsan Neretva, oo ah xaruntii ugu weyneyd ee Dagaalkii Qaboobaa ee Bosnia oo dhowaan loo furay martida.
Ka soo degida biyaha cad ee webiga Neretva oo ku yaal fiiq.
SarajevoFunkyTours, Besarina čikma 5. 08: 00-18: 00. Maalinta kala soocida biyaha cad ee Neretva waxay bilaabmaysaa markay ka amba baxdo Sarajevo saacadu markay tahay 09:00, kuna imaanshaha Konjic abbaaraha 10:00. Halkaas, safarku wuxuu u jiheysanyahay barta laga bilaabayo jaranjarada, oo ku taal agagaarka 45 min wadad taag ah. Jidka waxaa ku yaal aragtiyo badan oo ku saabsan harada Boračko iyo qulqulka sare ee webiga Neretva iyo canyon si fudud ayey ufiican yihiin. Waxaa jira waqti nasasho leh dabbaal, qorrax-maydhasho, quusid ama waxqabadyo kale. Safarku wuxuu ku dhammaan doonaa dhowr kiiloomitir meel ka fog Konjic, halkaas oo gaadiidku ku sugi doono inuu kuu qaado habka maxalliga ah ee qadada / cashada loo sameeyo. Safarka Sarajevo abbaare 17:00, imaanshaha Sarajevo 18:00. (la cusbooneysiiyay Agoosto 2020)
La kulan Safarka Bosnia, Velika Avlija Br. 14,, lacag la'aan: +387 60 33 47 729. 9: 00-17: 00. Dalxiis raaf ah oo abaabulan oo lagu qabtay webiga Neretva. Waxaa ku jira gaadiidka baska laga raaco ee ka socda Sarajevo ilaa Konjic (bixitaanka 08:00), saldhiga saldhigga iyo wareejinta buurta, 20 km rafting (ca. 3 - 4 saacadood), qadada galabtii ee Konjic, iyo ku noqoshada Sarajevo. Kirada dharka qoyan ee neoprene, qalabka badbaadada iyo cabitaanada oo dhan ayaa lagu daray. Neretva waa duurjoogta bilowga xilli ciyaareedka (Maajo) waxayna ugu xasilloon tahay dhammaadka xagaaga (Ogosto). 100 KM. (la cusbooneysiiyay Agoosto 2020)
Gudaha Sarajevo, Zelenih beretki 30,, lacag-la'aan: +387 33 53 43 53. Sabti ilaa Axad 09: 00-14: 00, Isniinta ilaa Jimcaha 9: 00-17: 00. Safarka maalinlaha ah ee raafka ee Neretva oo ay ku jiraan gaadiidka iyo hagaha. Kaliya kooxaha ugu yaraan 6 qof la aqbalo. Ka bilow 08:00, boos celin ayaa loo baahan yahay ugu yaraan 24 saac kahor. 100 KM. (la cusbooneysiiyay Agoosto 2020)
Marka heerkulku ka kaco magaalada, seeraha aqua ee Ilidza ayaa laga yaabaa inay bixiso nasasho.
Ilidza Thermal Riviera (Termalna rivijera Ilidža), Butmirska Cesta 18, 71211 Ilidza (garoonka diyaaradaha gadaashiisa, 5 daqiiqo ayuu uga socdaa xarunta taraamka ee Ilidza). 9: 00-22: 00. Beerta biyaha oo leh barkado dabaal oo gudaha iyo dibedda ah, barkad mowjado ah, waxyaabo duugis ah, iyo bogagga biyaha. Kaabayaasha waxyar ee duugoobay, laakiin biyaha dabiiciga ah ee baaruuddu ku badan tahay ayaa ka dhigaya maalmaha xagaaga kulul. Saunada iyo xarunta jirdhiska ee laga heli karo qaybta hoteelka Hills. 7 KM maalmaha usbuuca, 9 KM inta lagu jiro dhamaadka usbuuca, carruurtu waxay bixiyaan 2 KM ka yar, fayoobaanta oo dheeri ah 15 KM, jir dheeri ah 10 KM, fayo qabka & jir dhiska dheeri ah 20 KM. (la cusbooneysiiyay Agoosto 2020)
Isa-begov Hamam, Bistrik 1 (Oo ku xigta Masaajidka Emperor, oo kaabiga ku haya Buundada Latin). Isniinta ilaa Jimcaha 10: 00-13: 30 ragga, 14: 00-18: 00 dumarka, Sa 09: 00-19: 00 dumarka, Su 09: 00-19: 00 ragga. Hamam lagu dayactiray hudheelka Isa-begov oo leh qolka uumiga dhaqameed ee ottoman, barkadda biyaha iyo tas-hiilaadka duugista. 20 KM. (la cusbooneysiiyay Agoosto 2020)
Waa suurtagal in lagu bixiyo kaararka deynta inta badan xarumaha wax iibsiga iyo ku dhowaad dhammaan maqaayadaha ka wanaagsan. Arrintu sidaa ma aha, si kastaba ha noqotee, inta badan makhaayadaha, naadiyada iyo dukaamada lagu iibiyo farsamada gacanta iyo xusuusta qaybta hore ee magaalada, halkaas oo xitaa "qoraalladu aad u waaweyn yihiin" laga yaabo in aan si fudud loo aqbali karin (sidaa darteed waa ay fiicantahay in la helo qoraallada ugu yar (10s iyo 20s) waa la kaydiyay, sidoo kale).
Suuqa Markale (Gradska Tržnica) (waa dhisme weyn oo huruud ah, irridda ugu weynina waxay ku taal Ferhadija oo gadaal ayey u martay Mula Mustafe Baseskije halkaas oo ay ku taalo taallo ku dheggan derbiga oo ay ku qoran yihiin magacyada dhibbanayaasha). 07: 00–17: 00. Goobta Suuqa Magaalada suuqa balbalada waxaa loo qorsheeyay Ogosto Butsch sanadkii 1894 qaabkii loo yaqaan 'Neo-Renaissance style' waxaana la furay 1895. Wuxuu calaamadeeyay bilawga faragelinta NATO waxaana halkaas ku dhamaaday dagaalkii ka dib duqeyn, taasoo galaafatay nolosha ilaa 40 qof. Markale waxaa la duqeeyey laba jeer: midkii ugu horeeyey wuxuu ahaa Feb 1994 (oo muhiim u ah dhanka qasaaraha) iyo tan labaad Ogosto 1995 (oo bilawday faragelinta millatari ee NATO, iyo iyada, bilowgii dhamaadka dagaalka). Maanta suuqa waa la dayactiray waxaana hoy u ah hilibka, farmaajo, iyo ganacsatada qudaarta. Bilaash (la cusbooneysiiyay Agoosto 2020)
Baščaršija waxa ku jira roogag badan iyo alaabada maxaliga ah ee iibka ah. In ka badan qarni ka hor, waddo kasta oo ka mid ah aaggan waxay hawkeedu ahayd alaab gaar ah: tusaale ahaan, hal waddo ayaa wada lahayd nuujiyeyaasha, kabaha ayaa mid kale saarnaa, dahabkuna mid kale ayuu ku yaallay. Intaad ku sugan tahay Baščaršija, ha moogaanin soodka dhulka hoostiisa mara ee ku fidsan dhinaca galbeed ee wadada Gazi Husrev-begova (fur 08: 00–20: 00).
Wax iibsiga xusuusta ee Gazi Husrev-Bey ee bezistan.
Bedesten (Gazi-Husrev Beg's Bezistan), Gazi Husrev-begova. M-Sa 08: 00-20: 00, Su 10: 00-19: 00. Suuq la daboolay oo loogu talagalay haberdashery iyo farsamada gacanta, oo la dhisay xilligii Boqortooyadii Cusmaaniyiinta, oo leh naqshad ku saleysan naqshada masaajidda. Sariirta jiifka waxay u adeegtaa sida dhismaha dhexe ee qaybta ganacsiga taariikhiga ah ee magaalada, waxayna asal ahaan ka soo jeeddaa Greco-Roman basilica or kaiserion taas oo ujeedo isku mid ah u adeegtay. Xilliyadii Cusmaaniyiinta, jiifku wuxuu ahaa mid muhiimad dhaqaale leh oo magaalooyinku u kala saarnaayeen laba qaybood: kuwa gogosha jiifa, iyo kuwa aan lahayn. (la cusbooneysiiyay Agoosto 2020)
Gallery Isfahan, Saraii 77 (gudaha Morića Inn),, ✉ info@isfahans.com. Bakhaarka rooga dhaqanka ee Beershiya ku dhex yaallay Morića Inn. Roogagga gacanta lagu farsameeyay waa kuwo qiimo badan, laakiin dejinta gudaha hudheelka dib loo dhisay waxay mudan tahay booqasho. (la cusbooneysiiyay Agoosto 2020)
Sahinpasic, 38d Titova. Waxay leedahay ururinta adag ee suugaanta taariikhiga ah.
Baklava Dukaan Sarajevo, Ćurčiluk Veliki 56 (dhinaca woqooyi ee Brusa Bezistan). Baklava sax ah. Xul ballaaran oo baklava ah oo ku jira dhadhanno badan (walnut, yicib, hazelnut, pistachio, iwm), halkaasoo ay ku jiraan baklavaasku oraah (walnut) waxaa loo tixgeliyaa inay yihiin kuwa ugu dhaqanka badan. (la cusbooneysiiyay Agoosto 2020)
Wadada Kazandžiluk. Wadada waxaa loogu magac daray naas-nuujiyaha sare ee Sarajevo, oo leh dukaamo ay ka mid yihiin Sakib Baščaušević iyo Aganovic. (la cusbooneysiiyay Agoosto 2020)
Sarajevo waxay bixisaa xarumo ganacsi oo badan, kuwa ugu caansan waa Xarunta Magaalada Sarajevo ee degmada ganacsiga. Inta badan xarumaha laga dukaameysto ee ku yaal magaalada Sarajevo waa kuwo dhowaan la dhisay ama la dayactiray, waxayna siiyaan khibrad ganacsi oo casri ah kuwa u adkaysan kara muusigga pop-ka ah ee dhibta badan ee ay maalin walba ciyaarayaan.
Xarunta Magaalada Sarajevo ee ku taal degmada ganacsiga: dukaamaysiga, cuntada iyo madadaalada.
Xarunta Magaalada Sarajevo, Vrbanja 1. 10: 00-22: 00. Calaamado ku leh degmada ganacsiga, kuna taal bartamaha magaalada Sarajevo oo ku teedsan jidka isku xidha garoonka diyaaradaha iyo bartamaha magaalada taariikhiga ah. Guryo waa xarunta ugu weyn ee wax laga iibsado magaalada, oo leh 160 dukaanno, maqaaxiyo aan tiro lahayn iyo baarar, iyo hudheel qaali ah. (la cusbooneysiiyay Agoosto 2020)
Xarunta Dukaameysiga Alta, Franca Lehara 2 (wadada geeskeeda ka timaadda Xarunta Magaalada Sarajevo). M-Sa 09: 00-22: 00, Su 10: 00-20: 00. Xarunta wax laga iibsado ee ku taal degmada ganacsiga ee magaalada, oo leh 70 dukaanno. Caan ku ah dukaanka Lego ee ku dhexyaal. (la cusbooneysiiyay Agoosto 2020)
Xarunta BBI, Trg djece Sarajeva 1 (wadada dhinaceeda ka xigta Veliki Park). M-Sa 08: 00-22: 00, Su 08: 00-22: 00. Xarunta labaad ee wax iibsiga ee ugu weyn Sarajevo, ka dib Xarunta Magaalada, oo la aasaasay 2010, oo leh dukaamo 125 ah. Waxay ku guuleysatay Abaalmarinta Xarunta Dukaameysiga Yurub ee ICSC sanadkii 2011. (la cusbooneysiiyay Agoosto 2020)
Xarunta Magaalada Bosmal, Milana Preloga 12A. Xarunta wax laga iibsado ee ku taal daanta koonfureed ee webiga, ayaa la furay 2009, iyadoo leh 50 dukaanno. (la cusbooneysiiyay Agoosto 2020)
Xarunta Muhiimka ah, Zmaja od Bosne 7. 07: 00-23: 00. Dukaan yar oo laga dukaameysto ayaa la furay 2010 iyadoo ay ku dhowdahay 35 dukaanno. (la cusbooneysiiyay Agoosto 2020)
Macdanta, Ložionička 16. Mid ka mid ah xarumaha ganacsi ee ugu da'da weyn Sarajevo, ayaa la furay 2000, iyadoo leh qiyaastii 35 dukaanno. (la cusbooneysiiyay Agoosto 2020)
Xarunta weyn ee Ilidža, Butmirska cesta 14 (taraamka 3 jihada Ilidža). M-Sa 08: 00-22: 00; Su 08: 00-21: 00. Xarunta dukaameysiga ee Ilidža, oo leh 33 dukaamo. (la cusbooneysiiyay Agoosto 2020)
Lacagta maxaliga ahi waa konvertibilna marka (KM, Beddelka Calaamadda (soo gaabin caalami ah BAM), oo lagu xaddiday € 1 = 1.95583 KM (~ 1 KM = € 0.51)), waxaana laga isticmaalaa waddanka oo dhan. Makhaayado badan oo ku yaal Sarajevo, gaar ahaan kuwa ku yaal degmooyinka loo dalxiis tago, ayaa sidoo kale laga yaabaa inay ku aqbalaan yuuro at 1 = 2 KM. Sicirka sarrifka ah ee yaabka yaab leh waxaa u sabab ah Mark Beddelka ah oo lagu dhajiyay 1: 1 illaa markii ugu horreysay Deutsche Mark oo tan iyo markii lagu beddelay Euro ee sicirka sarrifka ee kor lagu soo sheegay. Bangiyada ka sokow, lacagta waxaa lagu kala beddeli karaa xafiis kasta oo boostada ah ama xafiis beddelaad lacageed / waab, oo labaduba ku kala firirsan magaalada oo dhan (hal waab oo sarrifka noocaas ahi ku yaal dhinaca bari ee Fagaaraha Baščaršija (laga bilaabo Noofambar 2017) ). Inta badan xafiisyada sarifka ee Sarajevo waxay shaqeeyaan 9:00 subaxnimo ilaa 9:00 pm, halka bangiyada badankood furanyihiin 8:00 am ilaa 6:00 pm maalmaha shaqada iyo 9:00 am ilaa 1:00 pm Sabtida.
Privredna banka Sarajevo (BOR Bank dd Sarajevo), Obala Kulina Bana 18,, fax: + 387 33 278 550. Bangigu wuxuu ku sameyn karaa sarrifka 11-ka lacag ee soo socda: AUD, CAD, CHF, DKK, EUR, GBP, HRK, NOK, SEK, TRY iyo USD. (la cusbooneysiiyay Agoosto 2020)
Xafiiska Bangiga ProCredit (ProCredit Bank dd Sarajevo), Franca Lehara bb,, fax: + 387 33 250 971. Lacagta beddelka BAM / EUR 0.2% (la cusbooneysiiyay Agoosto 2020)
Bangiga Hore ee ProCredit (ProCredit Bank dd Sarajevo), Zelenih beretki 8. Lacagta beddelka BAM / EUR 0.2% (la cusbooneysiiyay Agoosto 2020)
Bangiga Sparkasse, Zmaja od Bosne 7 (oo ku taal Xarunta Dukaameysiga ee Muusiga),, fax: + 387 33 280 230. Adeegyada macaamiisha gaarka loo leeyahay waxaa ka mid ah sarrifka lacagaha iyo isu gudbinta lacagaha. (la cusbooneysiiyay Agoosto 2020)
Bangiga Ziraat (ZiraatBank BH dd), Zmaja od Bosne 47c,, fax: + 387 33 525 712. Liiskooda sarrifka waxaa kujira AUD, CAD, CHF, CNY, CZK, DKK, EUR, GBP, HRK, HUF, JPY, NOK, RSD, RUB, SEK, TRY iyo USD. (la cusbooneysiiyay Agoosto 2020)
Waxaa lagu sheegaa Bosnia in dadka qaar ay wax u cunaan si ay wax u cabaan, qaar kalena ay wax u cunaan si ay u noolaadaan una shaqeeyaan, laakiin Bosnia runta ahi way shaqeeyaan oo waxay u noolaadaan inay wax cunaan. In badan oo fiiro gaar ah ayaa loo hibeeyay diyaarinta iyo cunida cuntada ee magaalada Sarajevo. Gastronomy-ka magaalada waxaa lagu horumariyey saameynta Bariga iyo Reer Galbeedka, iyo cunnooyinka Bosnia waxay diiradda saarayaan wax soo saarka maxalliga ah sida hilibka, khudradda, miraha iyo waxyaabaha caanaha laga sameeyo. Wixii macluumaad ah ee ku saabsan cuntooyinka caadiga ah ee Bosnia, eeg Boosniya # Cun.
miisaaniyadda <12 KM
Dhex-dhexaad 12 - 20 KM
Iskuday > 20 KM
Sarajevo waxay leedahay dukaamo aan tiro lahayn oo iibiya burek (rooti hilib ah, oo lagu iibiyo lakabyo culeys ahaan ama gabal ahaan), .evapi, iyo pizza. Pita (burek, sirnica, krompirusa, tikvenica, zeljanica iwm) waa nooc filo ah oo loo yaqaan 'pasty pie' oo guud ahaan lagu bixiyo dhowr nooc: hilibka (Meso), jiis (sirnica, Jiiska Bosnia oo loo yaqaan "jiis dhalinyaro" oo la mid ah ricotta oo aan waligiis gaboobin), jiis iyo isbinaajka (zeljanica), bocor (tikvenica), iyo baradho basbaas leh (krompirusa). Waxaa badanaa lagu qaataa suugo caano fadhi ah oo u eg labeen dhanaan. Inta badan .evapi meelaha aan khamri loo adeegin.
Ascinica ASDž, Ćurčiluk mali 3 gudaha Bascarsija. 08: 00–19: 00. Markaad ku xanuunsato hilibka dufanka badan, ASDž waxay u adeegtaa cunto-karinta Bosnian-guriga ah, suxuunta khudradda udub dhexaad u ah (laakiin ha fileynin 100% khudradeed, maxaa yeelay qaar badan ayaa wali ku carfa xoogaa hilib ah). Ka dalbo miisaska kafateeriyada miiska: waxaad ku bixinaysaa saxanka oo waxaad isku qasan kartaa oo isku qori kartaa cuntooyin kala duwan isla saxanka. (la cusbooneysiiyay Agoosto 2020)
Buregdžinica Bosna, Bravadžiluk 11. Makhaayada pita & burek. (la cusbooneysiiyay Agoosto 2020)
Cakum Pakum, Kaptol 10. Makhaayad yar oo leh canjeelo aad u macaan (crepes). (la cusbooneysiiyay Agoosto 2020)
Mr Gurman, Kolodvorska (pofalici). Cunto dhakhso leh (la cusbooneysiiyay Agoosto 2020)
Petica, Bravadžiluk 29, gudaha Bascarsija. 08: 00–23: 00. Resuarant caan ah oo waasac ah oo u adeega hilibka lo'da oo dhan .evapi uguna caansan qasacad gudaha Bascarsija. Waardiyeyaashu waxay xirtaan dharka hiddaha iyo dhaqanka ee Bosnia. 3.50 KM ćevapi. (la cusbooneysiiyay Agoosto 2020)
Pizzeria Ago, Mula Mustafe Baseskije 17. 08: 00-23: 00. Pizzas qiimo wanaagsan, iyo canjeelo loogu talagalay macmacaanka oo kaliya 1 KM, kuwaas oo u ah faa iidooyin socotada miisaaniyadda ilig macaan. (la cusbooneysiiyay Agoosto 2020)
Pizzeria Maslina, Trg Heroja 10. Qiimo la awoodi karo oo leh noocyo kala duwan oo cunooyin ah, laga soo bilaabo Talyaani ilaa Bosnian-ka cunno dhaqameed. (la cusbooneysiiyay Agoosto 2020)
Pizzeria Terrazza, Strossmayerova 8. Pizzas iyo ismaris Bosnia (la cusbooneysiiyay Agoosto 2020)
baasaboorka, # 32, Ferhadija bb 557-190. Jawharad layaableh oo makhaayad kutaala bartamaha degmada wax laga iibsado. Waa inaad hoos udhigto jaranjaro yar oo aad riixdo batoon si loogu kariyo maqaayada laakiin marka aad halkaa timaado waad ku farxi doontaa inaad waqtiga qaadatay inaad hesho. Waa mid aad u heer sarreeysa, deggan, nadiif ah, liiska Ingiriisiga iyo kuwa sugaya ayaa ku hadla Ingiriis. Cunto aad u wanaagsan oo qiimo fiican leh. Cuntada waxaa lagu kariyaa sharaf iyadoo qiimaha lagu dalacayo, runtii waa heshiis wanaagsan.
Cafe & restoran Ahar, Zmaja od Bosne 13. Makhaayad wanaagsan oo deggan oo leh menu-yurubiyan-talyaani ah iyo foorno leben ah. (la cusbooneysiiyay Agoosto 2020)
cappuccino, Grbavica (oo u dhow wabiga Miljacka ee aagga cagaaran.). Cunnooyinka Bosnia ee macaan iyo baastada iyo pizza ugu fiican gobolka.
Hanti, Bazardzani 3. 10: 00-03: 00. Cuntada Mexico, is biirsaday. Qaybo badan oo leh waxyaabo aad u cusub iyo jawi wanaagsan. DJs waxay ciyaaraan Guriga iyo Muusikada Techno. Marka la barbardhigo meelaha kale ee la midka ah, Hacienda waa ka qaalisan tahay laakiin wali jawi wanaagsan ayaa ku jirta. 8-12 KM koorso muhiim ah.
Guriga Spite-ka, oo leh barxad ku taal webiga Miljacka.
Guriga Cunista (Inat Kuca), Veliki Alifakovac 1 (ka soo horjeedka hoolka magaalada, ka gudub buundada oo bidix u qaado), bilaash: + 061 338 177. 11: 00-23: 00. Taariikhda maqaayaddan waxay ka soo bilaabmaysaa qabsashadii Austro-Hungaria, markii Sarajevo ay soo martay mashaariic ballaaran oo kaabayaal ah taasoo keentay xafiiska boostada, Matxafka Qaranka, Kulliyadda Sharciga, iyo kuwo kale oo badan. Markii la rabay in la dhiso Xarunta Dawladda Hoose, Austro-Hungaria waxay la kulantay madax adayg nin oday reer Bosnia ah oo la yiraahdo Benderija kaas oo ku noolaa hours meeshaas ah. Wuu diiday in gurigiisa loo dumiyo dhismaha Xarunta Dawladda Hoose, wadahadal dheer kadib wuxuu ogolaaday inuu hantidiisa u dhiibo iyadoo la raacayo 2 shuruudood: wuxuu doonayay kiish lacag bir ah oo dahabi ah magdhow ahaan, gurigana waa inuu u wareejiyaa leben leben dhinaca kale ee webiga. Tan iyo waagaas, dhismaha waxaa loo yaqaan guriga daacada, wuxuuna astaan ​​u yahay madax adayga Bosnia iyo iska caabinta dowladda. 1997, gurigii waxaa loo beddelay makhaayad qurux badan oo lagu iibiyo cunnooyinka sida ursan ee u eg iyo takhasusyada Bosnia. Terrace waxay bixisaa aragti webiga korkiisa iyo Aqalka Dawladda Hoose ee Sarajevo oo ay bedesho. Guriga waxaa lagu qurxiyay qaabka bariga, wuxuuna mudan yahay in lagu booqdo jawiga kaligiis. 6-20 KM. (la cusbooneysiiyay Agoosto 2020)
Karuzo, Dženetića Čikma bb. 12: 00-15: 00 iyo 18: 00-23: 00. In kasta oo aysan u adeegin cunnooyinka caadiga ah ee reer Bosnia, haddana makhaayaddan waxaa ku yaal menu khudradda / kalluunka ku saleysan, oo inta badan leh saameyn Talyaani ah (in kasta oo sushi sidoo kale la heli karo). Suxuunta baastada sidoo kale aad ayaa loogu talinayaa. Waa makhaayad aad isugu dhow oo keliya 18 jeer markiiba, kuugga cunnadaada ayaa amarkaaga qaata oo diyaarsada cuntada isla markaana u adeegta naftiisa. La soco inaad u baahan tahay inaad heshid heshiis wanaagsan oo waqti badan kuu banaan - waxay qaadan kartaa dhowr saacadood ka hor intaadan bixin.
Mrkva, Bravadžiluk 13. 08: 30-23: 00. Cuntada caadiga ah ee reer Bosnia, oo loogu jecelyahay deegaanka. Silsilad yar oo 5 makhaayadood ah ayaa ku baahday aagga magaalada weyn ee Sarajevo.
Dayax waraaq ah, Xamdijee eremerlica 45. Isku darka suxuunta cunnada caalamiga ah iyo foornada dhoobada dhaqameed. (la cusbooneysiiyay Agoosto 2020)
Park Princeva (مطعم الملوك), Iza Hrida br. 7,, lacag la'aan: + 387 33 532 403. 08: 00-23: 00. Waxyar ka qaalisan Inat Kuca, oo waliba u adeegaya cuntada Bosnia. Waxay ku yaalliin mid ka mid ah buuraha magaalada, waxaad leedahay muuqaal cajiib ah, gaar ahaan qorrax dhaca, marka aad ka maqasho salaadaha masaajidda hareeraha dooxada.
Restoran "Apetit", Gazi Husrev begova 61. "Jiko furan" iyo menu maalinle ah oo laga diyaariyo cunno cusub oo la xushay; suxuunta hilibka, suxuunta kaluunka, risottos, baastada, saladhyo mala awaal ah, baraakooyin udgoon iyo raaxo macaan oo macaan. Sidoo kale suxuunta vegan, khudraweyaasha iyo qurbaannada aan saliidda lahayn. (la cusbooneysiiyay Agoosto 2020)
Trattoria Uno, Zmaja od Bosne 45. Makhaayad Talyaani ah oo yar. Khudaarta la shiilay ee ka samaysan cunto ahaan waxay mudan yihiin in la tijaabiyo. (la cusbooneysiiyay Agoosto 2020)
Zeljo (Ćevabdžinica Željo), Kundurdžiluk 19. 08: 00-23: 00. Cuntada caadiga ah ee reer Bosnia, oo loogu jecelyahay deegaanka. Silsilad yar oo 4 meelood oo kala duwan leh ayaa ku fiday magaalada. Goob wanaagsan oo lagu booqdo carruurta.
Guriga Boosniya (Bosanska Kuca), Bravadziluk 3, Bascarsija. 24/7. Guriga Steak. Kuraasta gudaha iyo dibedda bartamaha Magaalada qadiimiga ah oo leh cunno dhaqameed badan oo reer Bosnia ah oo qiimo macquul ah leh. Waxaad fadhiisan kartaa banaanka ka soo horjeedka derbiga diiran ee foornada haddii ay qabow tahay. Qaar ka mid ah waardiyeyaashu waa kuwo si qallafsan u edeb daran oo waxay isku dayaan inay ka dhaadhiciyaan martida inay dalbadaan suxuun aad u tiro badan, iyagoo ka digaya in adeegyadu ay yar yihiin, taas oo aan sidaas ahayn. Muckalica, maraq maraq ah, waa qiimo macaan oo wanaagsan 10KM.
Dveri, Prote Bakovića 12. 09: 00-23: 00. Makhaayada guryaha lagu barto oo ku taal bartamaha Sarajevo. Dareen aad u raaxo badan, oo leh xargaha toonta, rooti badan oo diiran oo macaan, maraqa wadnaha, hilibka, iwm. (la cusbooneysiiyay Agoosto 2020)
Moja Mala Kuhinja, Tina Ujevića 13. 10: 00-23: 00. Makhaayad yar oo uu leeyahay Chef Muamer Kurtagic oo caan ah oo reer Bosnia ah oo marti galiyay barnaamijyo cunto karin ah oo ka socda TV-yada qaranka. Fikradda ayaa ah in dhammaan howlaha karinta ay u furan yihiin dadweynaha, macaamiisha ayaa ku raaxeysan kara karinta cuntada iyadoo waliba wax la barayo. Liiskiisa ayaa maalin walba isbedelaya iyadoo la raacayo helitaanka maaddooyinka. Cunnooyinka badankood ee uu diyaarsado cunto kariyuhu waxaa dhiirrigeliya qaar ka mid ah makhaayadaha ugu fiican Jarmalka oo uu sannado ka shaqeynayay. Makhaayada waxay u adeegi kartaa oo keliya qiyaastii 15 martida markiiba.
Makhaayada Kibe, Vrbanjuša 164. Iyagoo bixinaya aragtiyo cajaa’ib leh oo ku saabsan Sarajevo, Kibe Mahala waxay soo bandhigeysaa xulashooyinka ugu wanaagsan ee cuntooyinka qaranka Bosnia, oo ay ka mid yihiin wankii caanka ahaa ee candhuuf lagu tufay, iyo noocyo badan oo khamri ah oo ka yimid Bosnia iyo Herzegovina iyo gobolka. (la cusbooneysiiyay Agoosto 2020)
Makhaayada Vinoteka, Skenderija 12 (Meel u dhow xarunta dhaqanka iyo isboortiga ee Skenderija / hoolka "Mirza Delibasic"). Makhaayada Vinoteka waxay bixisaa xulashooyin kaladuwan oo kaladuwan oo lagahelayo cuntooyinka caalamiga ah iyo xulasho badan oo khamri ah gudaha iyo dibada. Makhaayada albaabka agtiisa waxaa ku yaal meel gawaarida la dhigto oo waardiye ah. (la cusbooneysiiyay Agoosto 2020)
Restoran Brajlovic, Samira Ćatovića Kobre 6, Ilidža. 07: 00-23: 00. Dhinaca hore ee biyaha Zeljeznica, Brajlovic wuxuu soo bandhigayaa xulasho balaaran oo ku saabsan takhasusyada Bosnia. Cevapcici-kooda waxaa si weyn loogu yaqaan inay soo jiitaan dalxiisayaasha iyo dadka deegaanka. (la cusbooneysiiyay Agoosto 2020)
Sarajevo waxay leedahay nolol habeenkii firfircoon oo leh baarar yar yar oo mawduucyo leh. Naadiyada waxaa badanaa la furaa ilaa subaxa hore. Khamiista, Jimcaha iyo Sabtida waa maalmo kulul oo lala seexdo in kastoo usbuuca intiisa kale ay bixiyaan nolol habeennimo aad u wanaagsan. Waxaa laga yaabaa in kabadan 100 kafateeriyada magaalada, oo udub dhexaad u ah magaalada qadiimiga ah, laakiin kala sooc cad ayaa lagu sameeyay in kafeega dhaqameed ee Bosnia la adeegsaday iyo inkale.
Bosanska kafana “Index”, Bascarsija 12 (Kazandziluk). Qaxwaha Bosnian (la cusbooneysiiyay Agoosto 2020)
Cafe Slastičarna “Palma”, Porodice Ribar br.5. Dukaanka kafeega iyo keega, oo ku yaal Sarajevo qayb ka mid ah magaalada loo yaqaan Hrasno, ayaa dib u bilaabay shaqadiisa 1970. 1985 "Palma" waxay heshay CD -Diplomatic Consula Code. (la cusbooneysiiyay Agoosto 2020)
Caffe Kamarija - Muuqaalka aragtida, Pod bedemom bb. Adeeg wanaagsan iyo muuqaalka muuqaalka magaalada Sarajevo (jaangooyada ayaa laga yaabaa inay xakameyso aragtida qayb ahaan, in kastoo). Sawirro waxaa laga yaabaa inay jiraan meelo kafiican oo wadada korkeeda ah (~ 100 m). (la cusbooneysiiyay Agoosto 2020)
Connectum / Klub Knjige, Veliki Curciluk 27. Qeyb ka mid ah dukaamada buugaagta.
Imperijal kafeega slasticarna, Ulica Maršala Tita 54. Waxay ku taal dabaqa hoose ee HKD Napredak Qasriga (Ururka Dhaqanka ee reer Croatia). Dhismahan oo la dhisay sanadkii 1913-kii iyada oo loo eegayo qaabaynta Dioniz Sukno ee qaabka loo yaqaan 'Secessionist style', ayaa waxa deggenaa dad badan, sida shineemo, tiyaatar iyo galleel, waana dhismihii ugu horreeyay ee magaalo ee wiish leh. (la cusbooneysiiyay Agoosto 2020)
Wasaaradda Ćejf, Kovači 26. Cabbitaanno waaweyn oo espresso ah iyo baristas si fiican u tababaran. Waxay kaloo leeyihiin karak iyo doolsho fiican. (la cusbooneysiiyay Agoosto 2020)
Miris Dunja, Ulica Čizmedžiluk 9. Kafee, kafee Bosnia iyo casiir. Maalin caadi ah kafeega Bosnia ee la cuno badanaa waa mid aad u wanaagsan, maalin wanaagsanna kafeega Bosnia wuxuu runti noqon karaa mid aan caadi ahayn. Kafee Boosniya: 2 KM. (la cusbooneysiiyay Agoosto 2020)
Mrvica, Paromlinska 58h (oo ku taal aagga deganaanshaha Novo Sarajevo, oo u dhow “Vjetrenjača” (Windmill)). Kafee, burush ama xitaa qado (la cusbooneysiiyay Agoosto 2020)
Mrvica Old Town, Ulica Jelića 5 (oo u dhaw Cathedral Quduuska ah ee Cathedral "Katedrala Srca Isusova"). Qaxwaha iyo noocyada kala duwan ee rootida iyo macmacaanka. Furmay ca. 2017. Ma jiro kafee Bosnian ah oo loo adeegay, kaliya qaababka qaxwada ee "casriga ah". (la cusbooneysiiyay Agoosto 2020)
Opera Bar / Kafeega, B Sarajeva 25 (oo ka soo horjeedda guriga Opera ee magaalada). 07: 00-12: 00. Xidhiidhka degdega ah ee WiFi, laakiin adeeguhu inta badan waa mid aan saaxiibtinimo iyo feejignaan lahayn. Waxay soo jiidataa jilitaanka iyo bulshada muusikada ee ka mid ah kuwa joogtada ah, in kastoo tani aysan ahayn meel gaar ah. Qiiq yar. Espresso: 2 KM. (la cusbooneysiiyay Agoosto 2020)
Halkee laga joogaa Sarajevo
Haddii aad timaaddo goor dambe oo habeenkii ah, cimiladu waa sax oo waxaad haysataa teendho, waxaad ku dhex degi kartaa si aan buuq lahayn baarkinka ku ag yaal webiga Miljacka. Fursadaha ayaa ah inay mar horeba jireen teendhooyin kale oo badan. Raac jidka dhinca galbeed ee magaalada, ku dhowow webiga oo ugu dambaysta. Xilliga xagaaga waxaa jira musqusha dadweynaha. Kani waa xeryaha duurjoogta ah, mana jiro waardiye ama adeeg.
Sidoo kale way fududahay in qol laga helo guriga dadka deegaanka.
Hoyga Guriga Dhakhtarka, Pehlivanuša 67 (Si toos ah buurta uga toos cathedral). Hostel yar yar oo ay maamusho haweeney si wanaagsan u safartay oo Mareykan ah oo ku sugan guri qurux badan oo ku yaal buurta dhinaceeda kana baxda wadada si ay u caawiso martideeda. Sariiraha qolka jiifka ah ee leh asturnaanta asturnaanta, iftiinka akhriska, iyo saldhigga lacag-bixinta, qaanad-weyneyaasha waaweyn, jikada si fiican u qalabaysan, aragtiyo aad u wanaagsan oo laga helayo balakoonnada. WiFi bilaash ah. Laga soo bilaabo 20 KM.
Hostel dhalinyarada Haris, Vratnik Mejdan 29. Milkiilaha, oo ah xarun yar oo magaceeda la yiraahdo Haris, ayaa sidoo kale leh hay'ad dalxiis oo ku taal meel u dhow fagaaraha xamaamka ee Kovaci 1 oo wuxuu kugu qaadan karaa safarro magaalada oo dhan ah, oo lagu sharraxay khibradiisa shaqsiyeed ee dagaalka. In kasta oo ay qasab tahay inaad socodka ka kacdo qiyaastii toban daqiiqo barxadda weyn si aad halkaas u timaaddo, waxaa habboon in socodku u socdo muuqaalka quruxda badan iyo soo dhoweynta, jawiga diiran.
Hostel & Guesthouse SA, Hrvatin 15. hostel qoysku maamulo. Waxay sidoo kale bixisaa lacag la’aan laga soo qaado tareenka / baska / istaanka garoonka. Waxay leedahay muuqaal cabsi leh oo magaalada ah. Laga bilaabo 24 KM.
Xarunta Magaalada Hostel Sarajevo, Saliha Hadzihuseinovica Muvekita No. 2/3 (Inta udhaxeysa waddooyinka Ferhadija iyo Zelenih beretki). Soo-bixid: 10:00. Dayactiray oo ku yaalay bartamaha Sarajevo. Meel aad u nadiif ah oo nadiif ah oo lagu nagaado qalabka jikada, 2 qolal waaweyn oo waaweyn iyo qolal wadaag ah, TV-ga cable, internet bilaash ah iyo wifi. Waxay leeyihiin qolal hurdo isku jira oo kala ah 4-, 5-, 6- iyo 10-sariirood oo lagu daray 2,3 iyo 4 sariirood oo gaar loo leeyahay. Bishii Abriil 2012, sariirta qolka jiifka ee 10-ka ahayd 25 KM. Sariirta qolka jiifka: € 15, qol laba jibbaar € 20. (la cusbooneysiiyay Apr 2016)
Motel Jasmin, Kupreska 26 (wadnaha Bascarsija). Kali, labalaab, seddexley musqulo gooni ah iyo TV. Laga soo bilaabo 30 KM oo ay ku jiraan quraac.
Hoteelka Ljubičica, Mula Mustafe Bašeskije 65 (oo ku taal Old Town, oo ku xigta joogsiga taraamka Bascarsija). Qolka la soo bandhigay wuxuu noqon karaa meel jiif ah oo ku taal mid ka mid ah dhowr meelood - wuxuu noqon karaa Mule Mustafa ulica, ama haddii kale buuraha ka xiga magaalada. Haddii aad booqanayso markii ugu horreysay, waxaad ka qabanqaabin kartaa khadka tooska ah ama telefoonka, sidoo kale waxaad la qabanqaabin kartaa in lagaa qaado saldhigga tareenka, ama labada boosteejadood ee basaska ee magaalada. Milkiilaha hoteelkan ayaa leh khiyaano yar oo ay ku qaadeyso dadka iyada oo 'diiwaangelin maalinle ah' oo 3 KM ah, in kasta oo ay masuuliyiintu kaliya u baahan yihiin in qofka la diiwaangeliyo hal mar markii uu dalka soo galayo iyada oo aan wax lacag ah laga qaadin. Sidoo kale, qolalka iyo hoteelku aad uma nadiifsana. 23 KM / seexan
Hudheelka Posillipo, Besarina Cikma 5 (ku dhowaad toos uga soo horjeedka isha). Shaqaaluhu waa dad aad u saaxiibtinimo badan kuna wargeliya wax walba min makhaayadaha wanaagsan ilaa sheekooyinkii dagaalkii 1990-meeyadii. 30 KM.
Hoyga / Prenociste Kod Keme, Mali Ćurčiluk 15 (oo ku taal wadnaha Bascarsija). Kali ah: 30 KM.
Ballaarinta Sebilj, Bravadžiluk bb (Obala Kulina baba inta udhaxeysa Careve cuprija iyo Novi badankood wabiga Miljacka). Inta badan shaqaaluhu waxay si fiican ugu hadlaan Ingiriisiga. Makhaayada internet-ka ee kafeega hoose waa isla aqal, makhaayad ku taal qolka hurdada. Makhaayadaha ku yaal Old Town, raashinka iyo farmashiyaha dhammaantood waxay ku jiraan masaafo lug ah. Wax ka qabashada meelaha la seexdo oo keliya - waxyaabaha wanaagsan: Goobta, shaqaalaha saaxiibtinimada leh, biyaha kulul, nadiif ah. Waxyaabaha xun xun: internet la'aan, gidaaraduhu way khafiifsan yihiin waraaqaha - waxaad maqli kartaa qof qufaca (ama qayliya) qolka ku xiga si fudud iyo sidoo kale muusig cod dheer oo ka socda sagxadda ilaa ilaa saqbadhkii, sariiro aan sariir lahayn. Qubeyska Unisex (kaliya 2) iyo musqusha. Ma jirto hab lagu xiri karo musqusha ama aagga qubayska marka gudaha lagu jiro. Ma jiro adeeg dhar dhaqid, madbakh la’aan. Ma jiro sanduuqyo lagu xidho qalabka. 30 KM.
Dhismaha Dhismaha, Hadzisabanovica 15,, lacag-la'aan: + 387 61 566 350. Qolka jiifka: 20-30 KM.
Hotel Xayaat, Abdesthana 27 (Wax ka yar 5-daqiiqo woqooyi-bari socod ka ah Kovači Square, oo u dhow Bascarsija). US $ 70. (la cusbooneysiiyay Agoosto 2020)
Hoteelka & Huteel Kan Sarajevo, Brace Begic 35 (oo u dhow istaanka basaska). Qolal jiif ah oo afar jibaar ah iyo waliba guryo. Makhaayada goobta ku taal iyo kaalmada shakhsi ahaaneed ee daawashada. Laga bilaabo 40 KM. (la cusbooneysiiyay Agoosto 2020)
Garni Hotel Konak, Mula Mustafe Başeskije 54 (Ka qaad lambarka 1 taraam xarunta saldhiga tareenka oo aad Fagaaraha Dooxada. Raac taraamka taraamka ee galbeedka illaa laba baloog, waana bidixdaada, raadso calaamadda casaanka iyo caddaanka.). Waxaa la dhisay 1962 oo gebi ahaanba la dayactiray 2008. Shaqaalahu waa saaxiibtinimo, waxay ku hadlaan Ingiriisiga, xilliyada fasaxana waxaa lagu qancin karaa inay wadahadlaan. Waxyaabaha hudheelku ka kooban yahay waxaa ka mid ah quraacda, musqulaha Ensuite iyo kombuyuutarrada ku xiran internetka, halka qolalka hudheellada ay yihiin laba sariirood oo gaar loo leeyahay oo leh telefishanka dayaxgacmeedka wadaagga musqusha saddexda qol. Kali ah: € 50-60; Labo laab: € 70-80.
Hoteelka Hecco Deluxe, Ferhadija 2. Hoteelku wuxuu soo bandhigayaa 15 suud oo qalabaysan oo loogu talagalay heerarka ugu dambeeya adduunka. Waxaa jira makhaayad ku taal dabaqa 10aad, oo bixisa aragti aan la ilaawi karin oo ku saabsan panorama ee Sarajevo. (la cusbooneysiiyay Agoosto 2020)
Hoteel Michele, Ivana Cankara 27. Shaqaaluhu si qurux badan ayey u fiican yihiin, quraacda iyo dharka lagu dhaqo waxaa ku jira sidoo kale waxaa ku yaal gawaarida gaarka loo leeyahay oo leh wiish toos ah oo loo maro dabaqyada qolka iyo internet xawaare sare leh.
Hoteelka VIP, Jaroslava Černija br 3. Buundada Laatiinka waxay 300 mitir u jirtaa Hotel VIP, halka Bascarsija Street ay 300 mitir u jirto. Gegada diyaaradaha ee Sarajevo waxay 9 km u jirtaa guriga. (la cusbooneysiiyay Agoosto 2020)
Motel Sokak, Mula Mustafe Bašeskije 24 (Wax yar uun ka hooseeya wadada taraamka Bascarsija.). Waa wax yar oo nadiif ah, deggan, saaxiibtinimo leh oo raaxo leh, oo ku jira dhisme duug ah laakiin casri ah gudaha. Labo laab: US $ 100. (la cusbooneysiiyay Agoosto 2020)
Opal Home Sarajevo (Hoteelka Opal Home), Despićeva 4. Hoteelka afarta xiddig leh naqshad casri ah iyo gudaha raaxada ah, oo la furay 2014, wuxuu bixiyaa 12 qol oo raaxo leh iyo 22 sariirood. (la cusbooneysiiyay Agoosto 2020)
Ballaarinta Čobanija, Čobanija 29. Musqulaha gaarka loo leeyahay iyo telefishanka dayax gacmeedka. Qolalka waa nadiif oo si fiican ayaa loo ilaaliyaa, quraac qaaradeedna waa la bixiyaa. € 50.
Balaarinta Stari Grad, Sagrdžije 29A (ka sii soco buurta dhanka Sebilj). Bixitaan: 10: 00-11: 00. Huteel raaxo leh oo masaafo dheer uga socda magaalada duug ah oo leh shaqaale saaxiibtinimo oo diyaar u ah inay ka caawiyaan safrayaasha inay magaalada ku wareegaan khariidado iyo talooyin. Waxay leeyihiin 2 shabakadood oo wifi ah: net_7413 (lambarka sirta ah: 102030102030) dhismaha oo dhan, iyo 7D5DC8 qolalka 308 iyo 309 (lambarka sirta ah: 286283949). (la cusbooneysiiyay Agoosto 2020)
Hoteelka Terex, Ive Andrica 23, 71123 Dobrinja (oo masaafo fog u jirta garoonka diyaaradaha), fax: + 387 57 317 150. Huteel yar oo ku hareereysan guryaha kirada soviet-ka oo ku yaal aagga la deggan yahay ee Dobrinja, oo u dhow degmada ganacsiga ee Dobrinja. 180 KM. (la cusbooneysiiyay Agoosto 2020)
Hoteelka Imzit, Lukavička Cesta. Hoteel aasaasi ah oo ku yaal duleedka magaalada Dobrinja oo ku taal dhinaca hoose ee buurta Suma Mojmilo. 160 KM. (la cusbooneysiiyay Agoosto 2020)
Huteelka Octagon, Akifa Šeremeta 48. Hoteel qurux badan oo 3 xidig leh oo ku yaal xaafad la degan yahay oo ka soo horjeedda garoonka diyaaradaha, ayaa ku habboon safarleyda ganacsiga iyada oo la seexdo habeen. 160 KM. (la cusbooneysiiyay Agoosto 2020)
Fasaxa Hoteelka (horaantii Holiday Inn), Zmaja od Bosne 4, 71000 Sarajevo (5 daqiiqo socod tareenka iyo boosteejada baska, iyo qiyaastii 10 daqiiqo socod ah oo ka socota Xarunta Magaalada.),, fax: + 387 33 288 288. Soo galid: 12 duhurnimo, ka bixitaan: 12 duhurnimo. Nadiifi, amni, qolal gaar loo leeyahay oo wanaagsan oo leh musqulo gaar ah iyo qubeys, si wanaagsan loo ilaaliyo Shaqaalaha saaxiibtinimadu waxay ku hadlaan Ingiriis. Kaararka amaahda waa la aqbalay. Makhaayada dabaqa seddexaad waa weyn tahay. 118 XNUMX. (la cusbooneysiiyay Agoosto 2020)
Hoteelka Bristol Sarajevo (Novotel Sarajevo Bristol), Fra Filipa Lastrića 2 (15 daqiiqo oo baabuur ah oo ka socota garoonka diyaaradaha, 5 daqiiqo ayaa loo socdaalaa baarlamaanka, 5 min baabuur ilaa Old Town). Gelitaan: 14:00, out-out: 12:00. Si buuxda loo dayac tiray. Qolal waaweyn iyo sariiro raaxo leh. Shaqaalaha saaxiibtinimada leh, saddex maqaaxiyo / makhaayado. Qamri looma adeegin, xalaal ah shahaado (laakiin quraacda faafida quruxsan waxaa ku jiri kara suxuunta shaki). Lagu qabtay tixgelin ahaan mid ka mid ah hudheelada waaweyn ee ugu wanaagsan magaalada. Ujrada gelitaanka dalxiis yar ayaa lagu darayaa qiimaha qolka. Sida ugu fudud ee lagu tago magaaladdii hore waa tagsi (kaas oo laga dalban karo soo dhaweynta), meesha ugu dhow ee taraamka la istaago waa Pofalići (~ 300 m). Qol ka sarreeya 160 KM.
Hoteelka Central, Ćumurija 8 (dhinaca midig ee waddada lugta leh ee Strossmayerova). Mid ka mid ah hudheellada ugu da'da weyn magaalada taariikh ahaan caan ku ah spa, ayaa hadda loo tixgeliyaa mid ka mid ah hudheelada waaweyn ee waaweyn ka dib markii dayactirkeedii dhowaa. Sidoo kale spa waa heer sare.
Midabada Hoteelka (Colors Inn Sarajevo), Koševo 8. Colors Inn Hotel Sarajevo waxay leedahay 37 qol oo raaxo iyo laba qol leh iyo baarkinka gaarka loo leeyahay. (la cusbooneysiiyay Agoosto 2020)
Hotel Europe oo ku yaal bartamaha Sarajevo, oo ka dambeeya Bezestan iyo Taslihan.
Hotel Yurub, Vladislava Skarića 5 (oo ku xigta suuqii hore ee Turkiga, Bezistan, iyo Tašlihan). Waxaa la dhisay 1882 isla markaana ku xigta burburka qarniyadii dhexe, dhawaan ayaa la cusboonaysiiyay, iyada oo kor loogu qaaday illaa shan xiddigood oo heer sare ah. Hoyga dad badan oo caan ah oo u yimaada shaqo ama booqda magaalada, sida John Travolta, Brad Pitt iyo Angelina Jolie. Café-ga Viennese Café-ka waa mid weyn, oo bixiya badhtamaha Yurub iyo sidoo kale takhasusyo maxalli ah. Hoteelka ayaa bixiya aragti ku saabsan goobta qadiimiga ah ee Tašlihan oo ku xigta. (la cusbooneysiiyay Agoosto 2020)
Huteel Madaxweyne Sarajevo, Bazardžani 1. Waxay ku taal meel u dhow Xarunta hore ee magaalada Sarajevo. Madaxweynaha Hotelku wuxuu bixiyaa 72 qol oo raaxo leh, garaash, qolka quraacda, Hoolka Congress -ka iyo sidoo kale baar Café/lobby ah. (la cusbooneysiiyay Agoosto 2020)
Radon Plaza, Džemala Bijedića 185 (salka hoose ee munaaradda Avaz, oo ku xigta qolka bandhigga BMW). Waxaa loogu magac daray magaca dambe ee milkiilaha, oo sidoo kale ah milkiilaha wargeyska Avaz iyo mid ka mid ah dadka magaalada ugu taajirsan. US $ 138.
Hoteelka Espana, Ive Andrića bb, 71123 Lukavica (oo masaafo fog u jirta garoonka diyaaradaha), fax: + 387 57 961 202. Hoteel ku yaal aag deggan oo deggan Sarajevo oo ku yaal xadka Bosnia iyo Herzegovina. 220 KM. (la cusbooneysiiyay Agoosto 2020)
Isgaarsiinta ee Sarajevo
Waxa jira afar hawl wadeeno mobilada ka hawl gala Sarajevo: BH Telecom (060, 061, 062), m: tel (065, 066, 067), HT Eronet (063) iyo Haloo (064). Ma jiro wax caymis ah 4G / LTE, laakiin 3G ayaa si ballaaran loo heli karaa. Maaddaama Bosnia iyo Herzegovina aysan ka mid ahayn EU, ama EEA, halkaasoo laga billaabo Juun 2017 xeerar cusub oo meerayn caalami ah laga dhaqan geliyo, sicirka wareegayaa laguma soo koobi karo ama laguma nidaaminayo dalka waana ka sii badnaan karaa. Taa baddalkeeda, Bosnia iyo Herzegovina waxay qayb ka tahay aagagga Balkan ay ku meeraystaan ​​oo leh Montenegro, Serbia iyo Waqooyiga Macedonia halkaas oo xogta caalamiga ah ay ku xiran tahay € 0.20 halkii MB laga bilaabo Julaay 2017. Waxaa lagula talinayaa inaad ka iibsato kaarka SIM-ka maxalliga ah, mid kasta oo ka shaqeeya , kaas oo laga iibsan karo mid ka mid ah kiimikada badan ee magaalada ku wareegsan. BH Telecom iyo m: tel waxay leeyihiin dalabyo gaar ah oo loogu talagalay dalxiisayaasha, laga bilaabo 20 KM 5 GB.
Lambarka deegaanka waa +387 33 (Kanton Sarajevo) iyo lambarka boostada / zip-ka ee maxalliga ahi waa 71000.
BH Telecom, Sarači 60. Isniinta ilaa Jimcaha 08: 00-22: 00, Sa 08: 00-16: 00, Su way xirantahay. Xirmada xirmooyinka internetka ee aasaasiga ah ee 5 KM ama € 2.5 (300 MB) iyo "Ultra Dalxiis 1" oo loogu talagalay 20 KM (5 GB). Weydiiso SIM Dalxiiska BH Mobile. 5 - 40 KM. (la cusbooneysiiyay Agoosto 2020)
Xafiiska Dhexe ee Boostada (BH Pošta), Obala Kulina bana 8. Xafiiska dhexe ee boostada oo leh hool lagu qurxiyo qurxinta oo balaadhinaya 40 × 15 m. Dhismuhu si aad ah ayuu u waxyeeloobay intii lagu jiray Dagaalkii Bosnia, laakiin waxaa dib loogu soo celiyay iyada oo la hagayo naqshadeeyaha reer Croatia Josip Vancaš. (la cusbooneysiiyay Agoosto 2020)
Xarunta Boosaha Gobolka Sarajevo (Centar Pošta Sarajevo), Put života bb. (la cusbooneysiiyay Agoosto 2020)
Nabdoonow oo iska ilaali khiyaanooyinka ka socda Sarajevo
Miinadu wali waxay ku qarsoon tahay keymaha ku teedsan Sarajevo
Weli waxaa jira goobo miinooyin badan iyo walxaha qarxa oo ku yaal aagga Sarajevo iyo hareeraheeda. Marna gasho dhismayaasha burburay (oo runtii dhif ah in la arko) oo had iyo jeer ku dhagan dusha sare ee laamiyada iyadoo laga fogaanayo buuro caws leh oo ku wareegsan magaalada. Meelaha aan laga sifeynin waxaa lagu calaamadeeyay cajalad jaalle ah ama astaamo, laakiin weli meelihii miinada lagu aasay oo dhan lama aqoonsan sababo la xiriira kheyraad la'aan iyo caawimaad la'aan caalami ah. Wadooyinka laamiga ah marwalba waa amaan. Dembiyada ka dhanka ah shisheeyaha aad ayey u yartahay magaaladuna waa ammaan in la booqdo. (Sida waddan kasta oo ka mid ah Yugoslavia-ka hore, ka taxaddar inaadan la galin doodaha xasaasiga ah ee ku saabsan siyaasadda dadka aadan aqoon, laakiin xitaa kuwani waxay noqon karaan kuwo aad waxtar u leh markaad la kulanto qof doonaya inuu ka hadlo.) La soco xulashada jeebabka kuwaas oo inta badan ku shaqeeya gawaarida dadweynaha.
Boosniya iyo Herzegovina waxay labanlaab yihiin heerka dhimashada gawaarida ee guud ahaan Yurub, Sarajevo waxay dhawaanahan aragtay shilal yar yar oo heer sare ah oo ay la socdaan dad lugeynaya. Feejignow haddii aad gaari wadid ama aad ka gudbeysid wadada.
Sarajevo waxay hirgalisay xaddidaad biyo habeenkii ah inta udhaxeysa 00:00 ilaa 05:00. Tani waa in la xadido biyaha ka lumay tuubooyinka duugga ah ee daadanaya magaalada. Tixgeli buuxinta dhalada biyaha fiidkii. (Naso oo hubi in Sarajevo ay leedahay biyo ammaan ah-oo runtii aad u tayo badan-biyo tuubbo, markay socoto.)
Qodobka ugu dambeeya ee caafimaadka iyo badbaadada ayaa ah in hawada Sarajevo ay si muuqata u dhuuqi karto wasakhda, sidaas darteed dadka xiiqda qaba ama kuwa dhibaatooyinka kale ee feeraha qaba ayaa laga yaabaa inay naftooda ku neefsadaan waqti badan, gaar ahaan habeenkii. Hubso inaad haysato dawo kugu filan, haddiiba ay dhacdo.
Lambarka guud ee gurmadka.
Buuraleyda Goobta,, lacag-la'aan: 121.
BIXAMK (Wadada Caawinta).
Saldhigga Booliska ee Cantonal (Policijska stanica Centar), Augusta Brauna 5,, fax: + 387 33 443 643. (la cusbooneysiiyay Agoosto 2020)
Caafimaadkaaga ku sugo COVID-19 dartii Sarajevo
Khatarta ugu weyn ee caafimaadkaaga, miinooyinka dhulka lagu aaso, waxaa iska leh qorraxda lafteeda. Ku ilaali maqaarka iyo indhaha shaashadda qorraxda ee ku filan iyo muraayadaha qorraxda, oo laga heli karo macsarada.
Apotheka Al-Hana, Ulika Patka 2 (oo ku taal guud ahaan dhismaha 'Pansion Stari Grad'). Daaweynta guud, iibinta shaashadda qorraxda ee 7.60 KM iyo muraayadaha qorraxda ee 48.90 KM. (la cusbooneysiiyay Agoosto 2020)
Apoteka Baščaršija (Apoteke Sarajevo), Obala Kulina bana 40. (la cusbooneysiiyay Agoosto 2020)
Apoteka Dobrinja (Apoteke Sarajevo), Salke Lagumdžije 15. (la cusbooneysiiyay Agoosto 2020)
Apoteka Hitna (Apoteke Sarajevo), Kolodvorska 14. (la cusbooneysiiyay Agoosto 2020)
Apoteka Marijin dvor (Apoteke Sarajevo), Maršala Tita 1. Farmashiyaha wuxuu kujiraa dhisme ganacsi oo la dagan yahay Marienhof (Marijin dhadhan) oo la dhisay intii u dhaxeysay 1885 iyo 1899 qaabki taariikh dambe, ee uu naqshadeeyay Karl Pařík. Dhismaha waxaa loo dhisay ganacsade caan ah oo reer Austaralia ah Ogosto Brown waxaana loogu magac daray xaaskiisa. (la cusbooneysiiyay Agoosto 2020)
Apoteka Novo Sarajevo (Apoteke Sarajevo), Zmaja od Bosne 51. (la cusbooneysiiyay Agoosto 2020)
Isbitaalka Guud ee (Prim. Dr. Abdulah Nakaš), Kranjčevićeva 12.
Biyaha ka yimaada ilaha iyo qasabadaha ku yaal Sarajevo waa kuwo amaan ah oo la cabi karo, laakiin waxay yeelan karaan ur xoog leh oo aan fiicnayn oo leh urka koloriin iyadoo ku xiran xilliga
Dhaxalka dhaqanka ee Ottoman, Austro-Hungarian iyo waqtiyadii ugu dambeeyay Yugoslavia waxaa lagu dhex milmay Sarajevo casri ah oo ah dhaqamo badan, metropole diimeedyo badan. Masiixiyiinta Kaatooligga iyo Orthodox, Muslimiinta, iyo Yuhuuddu way wadaagaan magaalada, sidaas darteedna, caqliga saliimka ah ee ku saabsan ixtiraamka loo hayo dadka asalka diintan ah waa in la dhowraa. Xitaa jiilka yar yar ayaa celcelis ahaan aad u diin badan marka la barbardhigo caasimadaha kale ee Yurub, in kasta oo aan dhammaan dhaqamada diinta loo raaci karin si isku mid ah si adag. Tusaale ahaan, dhalinyarada muslimiinta ah waxay dooran karaan inay cabaan khamri, laakiin waxay diidi karaan hilibka doofaarka, halka muslimiinta waaweyn ay u badan tahay inay diidaan labadaba. Maskaxda ku hay arintaas markii aad hadiyado siineysid qoyska aad martida u tahay. Markaad booqanayso masaajidda, dharka maqaarka daboola waa in la xidho, haweenkuna waa inay xidhaan xijaab daboolaya timahooda. Masaajidda ugu dalxiiska badan, xijaab ayaa loo heli doonaa dadka soo booqda ujeedkan.
In kasta oo Dagaalkii Boosniya uu ku dhammaaday xabbad joojin UN ay dhaqan gelisay, haddana khilaafaadka salka ku haya ee u dhexeeya qowmiyadaha kala duwan ee Sarajevo weli ma xallin. Dad badan oo degan ayaa ka badbaaday go'doomintii magaalada laga soo bilaabo 1992-95, ku dhowaad qof walbana wuxuu ku waayey qaraabadiisa iyo / ama saaxiibbadii isku dhacii. Dareen xoog leh oo ka dhan ah Serbigga ayaa laga yaabaa inuu ka dhex muuqdo dadweynaha reer Bosniya, nabarradii dagaalka ka soo baxayna xusuusta ayaa lagu reebay. In kasta oo dagaalku uusan ahayn mowduuc taban, sida lagu caddeeyey xusuusyo badan iyo matxafyo badan oo ku kala firirsan magaalada, haddana waa mowduuc xasaasi ah oo si fudud u soo qaata xusuus aan fiicnayn, haddii si aan loo fahmin looga hadlo. Marka laga soo tago naceybka loo qabo Serb-ka, inbadan waxay sidoo kale dareemayaan jahwareer ama xanaaq ku aadan Qaramada Midoobay, oo loo aaneeyo xasuuqii Srebrenica iyo ilaalinta aan ku filneyn ee muwaadiniinta Sarajevo intii lagu jiray go'doominta.
Waxaa jira khilaaf socda oo u dhexeeya midowgii reer Bosnia iyo gooni u goosanayaashii Serbia, oo ku dadaalaya madaxbanaanida Bosnia iyo Herzegovina. Maaddaama qaar ka mid ah xaafadaha Sarajevo ay ku yaalliin dhulka loo yaqaan 'Republika Srpska', fikradaha way kala duwanaan doonaan iyadoo ku xiran hadba meesha aad magaalada ka weydiiso. Xaaladda siyaasadeed ee gaar ahaan Sarajevo waa mid cakiran, dadka shisheeyaha ah ee mowqifka qabtana waxaa lagu eedeyn karaa faragelin aan xog ogaal ahayn oo ku saabsan arrimaha gudaha Bosnia. Guud ahaan, waxaa lagugula talinayaa inaad ka fogaato ka hadalka siyaasada, ilaa qofka aad wada sheekeysaneysaan uu mowduuca la yimaado asaga / ayada oo uu weydiiyo ra'yigaaga
Suuqa weyn ee Magaalada Sarajevo waxaa ku yaal goob weyn oo ay ku ciyaaraan carruurta. BBI Centar sidoo kale waxay leedahay mid, laakiin way ka yartahay. Labada suuqba waxyar bay galbeed kaga beeganyihiin faras magaalaha oo saaran wadada weyn.
Safaaradaha & Qunsuliyadaha Sarajevo
Ergooyinka Diblomaasiyadeed ee la aqoonsan yahay ee Bosnia iyo Herzegovina, oo wakiil ku leh Sarajevo oo leh qunsuliyadaha WaddankaAddressTel.FaxEmail
Austria Dzidzikovac 7 . fax: + 387 33 668 339. .
Azerbaijan Džemala Bijedića 305, 71210 Ilidža, Sarajevo . fax: + 387 33 695 801. .
Belgium Grbavička 4 . fax: + 387 33 208 362. .
Brazil Grbavicka 4 (Dabaqa 2nd) .
Bulgaria Radnička 30 . fax: + 387 33 668 189. .
Shiinaha Braće Begić 17 .
Croatia Ulica maršala Tita 28 . fax: + 387 33 472 434. .
Czech Republic Franjevačka 13 . fax: + 387 33 587 060. .
Masar Nurudina Gackića 58 .
France Mehmed bega Kapetanović Ljubušaka 18 . fax: + 387 33 282 052. .
Germany Skenderija 3 . fax: + 387 33 206 400. .
Greece Obala Maka Dizdara 1 . fax: + 387 33 203 512. .
Hungary Ulica Splitska 2 . fax: + 387 33 268 930. .
Indonesia Qeybaha 9 . fax: + 387 33 568 528. .
Iiraan Obala Maka Dizdara 6 .
Japan Bistrik 9 . fax: + 387 33 209 583. .
Kuwait Ulica Telirovića 1 (Talirevića 1) . fax: + 387 33 207 636. .
Liibiya Patriotske lige 45 .
Waqooyiga Makedoniya Qeybaha 57 .
Malaysia Radnicka 4a . fax: + 387 33 810 036. .
Netherlands Grbavička 4 . fax: + 387 33 223 413. .
Norway Ferhadija 20 . fax: + 387 33 666 505. .
Poland Višnjik 20 . fax: + 387 33 290 519. .
Qadar Dajanli Ibrahim-bega 23 .
Romania Aniobanija 28 . fax: + 387 33 668 940. .
Slovakia Trnovska 6 . fax: + 387 33 716 410. .
Slovenia Maglajska 4 . fax: + 387 33 251 773. .
Amarka Boqortooyada Malta Mula Mustafe Bašeskije 12 / II .
Spain Ulica Mehmeda Mujezinovića 13 A . fax: + 387 33 239 155. .
Iswidhan Ferhadija 20 . fax: + 387 33 276 060. .
Switzerland Zmaja od Bosne 11 (RBBH, Dhismaha B) .
Boqortooyada Ingiriiska Xamdije Cemerlica street 39a (Hamdije Čemerlića 39a) . fax: + 387 33 282 203. .
United States 1 Robert C. Wadada Wadada (Ulica Roberta C. Frasuera) . fax: + 387 33 659 722. .
Konjic wuxuu ku yaal webiga Neretva, oo 43 km koonfur-galbeed kaga beegan Sarajevo, halkaas oo sanadkii 2011 laga furay dadweynaha Tito iyo Bijenale bandhig farshaxan casri ah.
Jablanica, oo caan ku ah goobtii dagaalkii Neretva iyo necropolis
eHalal Safarka Mart > Boosniya iyo Herzegovina Xalaal Safar > Xalaal Safarka Sarajevo
Safarka Xalaasha Pakistan